Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/15 Febroary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/15 Febroary 2013
niankinan' (nitranga in-1) : Hahatafita zanaka
Andry niankinan'ireo fianakaviana mihitsy anefa Rakotoarisoa Joseph François. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nitana (nitranga in-2) : Tohina ihany ny hambom-po
Na dia nitana ny anjara toeran'ny mpampianatra sy nisalotra ny anarana hoe Made Yvette aza ny toerana voalohany noraisiny, nibahan-toerana sy nahazo laka kokoa teo amin'ny fiainan' i Raly ara-tsarimihetsika ny naha vadin-dRajao azy tao amin'ny «Malok'ila». (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
Randrianantoandro (nitranga in-1) : Haja Randrianantoandro. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
fizaràna (nitranga in-2) : Nahazo anjara tamin'izany fizaràna niavaka izany na ny lehilahy na ny vehivavy. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Androhibe (nitranga in-2) : Ny Akany Orchidées Blanches Androhibe no nikarakara ny hetsika. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Nahatratra (nitranga in-1) : Nahatratra 300 mahery izy ireo notronin'ny ray aman-dreny sy ny mpiray tampo amin'ireo zaza manana fahasembanana. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Swaziland (nitranga in-1) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
Nandrasana omaly nefa tsy mbola tonga ny ekipan'ny Mbabane Highlanders avy any Swaziland, hifanandrina amin'ny Terrible de la Côte Ouest avy any Boeny ao amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga amin'ny alahady ho avy izao. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
Tafaray (nitranga in-2) : FCG Analamahitsy # Tafaray Antsahamamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Surfs (nitranga in-2) : DOME RTA – ANKORONDRANO
«Sixty's love», hiangaliana amin'ny endrika hafa ireo hiran'ny Les Surfs Fampisehoana an-kira. (Faran’ny herinandro)
Tsaralalàna (nitranga in-1) : Anisan'ny tena nanahirana azy kosa anefa ny ampahan'ny sary tamin'ny «Malok'ila 6», izay nandalovan' izy ireo teny Tsaralalàna. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
ampiainana (nitranga in-1) : Marina tokoa fa fety no natao saingy misy ny fihetsika tsy tandrina sy tokony hahatonga saina satria raha fianarana sy fanabeazana no tiana hasongadina, dia ny mifanohitra amin'izany indraindray no zavatra iainana na ampiainana ny ankizy. (Dia aza gaga ianao!)
tarihy (nitranga in-1) : Ireo karazan-damaody tena malagasy sy vita amin'ny akora malagasy kosa no asehon'ny Haihaingo, izay tarihin'i Hanitra Andriamboavonjy. (Faran’ny herinandro)
Esperiance (nitranga in-1) : Andriatsilavo Antsahameva # Esperiance Ankatso. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Rabearisoa (nitranga in-1) : Io no niantson'i Fidy Rabearisoa ny hetsika izay hatolony ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia, anio alina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany, ao amin'ny Dôme Rta Ankorondrano. (Faran’ny herinandro)
Fandaharan-dalao Alahady 17 febroary: 11 Boster Anosizato # Imaintsoanala Ambohitsoa Ivanja. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Ofisy (nitranga in-1) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
Anjanahary (nitranga in-2) : Catalon Anjanahary # FC Anay Ankatso. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Tojonirina (nitranga in-3) : Efa tsy nahatsiaro tena intsony izy tamin'izay», hoy Tojonirina Heriniaina Alain, zanaka lahimatoan-dRakotoarisoa Joseph François. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Action (nitranga in-3) : Action Manjakaray # AFC Tsiadana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
fiantrakainy (nitranga in-1) : Indraindray mihinam-bary tsy misy laoka, ka atahorako hisy fiantrakainy amin'ny fahasalamany », hoy ity renim-pianakaviana ity. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
atahorako (nitranga in-1) : Indraindray mihinam-bary tsy misy laoka, ka atahorako hisy fiantrakainy amin'ny fahasalamany », hoy ity renim-pianakaviana ity. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
hevitry (nitranga in-1) : Ny filohan'ny Kaongresin'ny tetezamita sady mpitarika ny delegasion'ny ankolafy Ravalomanana, Mamy Rakotoarivelo, indray dia nilaza fa «efa mazava izany ny hevitry ny Vondrona afri-kanina fa tsy maintsy hampiharina io andininy io raha tsy izany dia mitoetra foana ny sazy». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Hanitry (nitranga in-2) : Hanitry Ny Aina. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
naolan' (nitranga in-1) : Ny vadin'ny mpiandry trano no naolan'izy ireo», hoy ny lehilahy monina ao amin'ity trano voatafika faharoa ity. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
niandohan' (nitranga in-1) : Raha ny lisitr'ireo rivo-doza nivoaka hatramin'ny niandohan'ny fahavaratra dia Haruna no mety anarana hisaloran'io andian-drahona io raha mivadika rivo-doza. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Manjakaray (nitranga in-1) : Action Manjakaray # AFC Tsiadana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
tafody (nitranga in-3) : Tsy tafody
Tsy tafody tany Amboasary Atsimo intsony i Mahagaga sy Mahalatsa, taorian'ny fandidiana azy ireo. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Diabe (nitranga in-1) : Diabe niainga teny Androhibe ka hatreny amin' ny kianjan'Alarobia no nataon'ireo ankizy, tao anatin' ny fahavitrihana sy ny hafaliana. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
villa (nitranga in-1) : Mbola ifandroritana eny amin'ny Fitsarana hatramin'izao ilay lalao « villa JJ » na loka trano mitentina Ar 90 tapitrisa eny Ivato, nanaovana lalao fisarihana ny 01 mey 2012. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
valizy (nitranga in-1) : Mahafeno valizy iray rehefa atambatra izy ireny, izay tsy maintsy entina avokoa rehefa manao ny fandraisana ny sary», araka ny fitantarany ihany. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Dakar (nitranga in-1) : Dakar Ambohimanarina # Galaxy Andraharo. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
mangaliba (nitranga in-1) : Handimby sy hanohy izany koa ny sabotsy 16 febroary ny tarika Hazolahy, izay mivoy ny gadona mangaliba. (Faran’ny herinandro)
niarahan' (nitranga in-2) : Nanampy izany koa ny efa nisian'ny fotoana niarahan'ireo mpilalaon'ny « Malok'ila » rehetra sy ny vady aman-janany mba hialan'ny elanelana eo amin'izy ireo. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
Randriamiarantsoa (nitranga in-2) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
CCEsca (nitranga in-1) : cCESCA – ANTANIMENA
«Fetin'ny mpifank'aty ty» miaraka amin-dRajao sy Raly, Françis Turbo ary Fou Hehy Ireo andrarezin'ny fampihomehezana no ho tafara-dia, etsy amin'ny CCEsca Antanimena, ny alahady 17 febroary izao, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, ao anatin'ilay hetsika «Fetin'ny mpifank'aty ty». (Faran’ny herinandro)
CAFÉ (nitranga in-1) : PIMENT CAFÉ – BEHORIRIKA
Iraimbilanja sy ny mozika rock amin'ny karazany maro Hiverina amin'ny seho takariva indray ny tarika Iraimbilanja, etsy amin'ny amin'ny Piment Café Behoririka anio alina manomboka amin'ny 9 ora. (Faran’ny herinandro)
nampiasaina (nitranga in-1) : «Teny amin'ny friperia no nividianana ny ankamaroan' ireo ankanjo nampiasaina tamin'ireo horonantsary ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hamelona (nitranga in-1) : Mpanakanto maherin'ny 30 no hiaraka hamelona indray amin'ny endrika hafa kely ireo hiran'ny Les Surfs, mpanakanto malagasy nanana ny lazany maneran-tany, tany amin'ny taona 60. (Faran’ny herinandro)
faha­tsiarovana (nitranga in-1) : Ho faha­tsiarovana io mpamorona malagasy io no anton'ity fampisehoana saingy hirona kokoa any amin'ny endrika jazz. (Faran’ny herinandro)
Ankibon' (nitranga in-1) : «Tsy misy idiran'ny politika akory fa Harena Ankibon'i Tongue no dikan'ny HAT eto», araka ny fanazavany. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
taorianfny (nitranga in-1) : Mbola afaka nandositra io dokotera io taorianfny naha voatifitra aza ka tsy niala lavitra ny trano dia nianjera ka maty», hoy ny ramatoa iray tompon'ny trano hipetrahan'ireo dokotera. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
maherisetra (nitranga in-1) : Feno azy roa lahy ny tokotanin'ny hopitaly rehefa milalao ary miaina sy maherisetra toy ny zazalahikely rehetra ihany izy ireo. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Tsiahivina (nitranga in-1) : Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika mihitsy ireo olona roa ireo ny tapaky ny volana mey hatramin'ny jona 2012 noho io lalao io izay marihina fa nandraisana mpilalao an'hetsiny anjara tamin'izany. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
talen' (nitranga in-2) : Manana zo mianatra sy beazina toy ny rehetra izy”, hoy Randrianarivony Faralalao, talen'ny Orchidées Blanches. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Ivato (nitranga in-1) : Mbola ifandroritana eny amin'ny Fitsarana hatramin'izao ilay lalao « villa JJ » na loka trano mitentina Ar 90 tapitrisa eny Ivato, nanaovana lalao fisarihana ny 01 mey 2012. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
Fort (nitranga in-2) : Pacifique Fort Duchesne # CC Club Anatihazo Isotry. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nihevitra (nitranga in-1) : Kivy be aho tamin'izay satria tena tsy nanan-kambara raha noharina tamin'ilay mpilalao niaraka tamiko, ka efa nihevitra ny tsy ho voaantso intsony. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nigadona (nitranga in-1) : omaly tamin'ny 4 ora latsaka fahefany tolakandro no nigadona an-tanindrazana ireo mpikambana ao amin'ny tarika Njila, avy any am-pitandranomasina. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
nisehoan' (nitranga in-1) : Ny alin'ny alarobia lasa teo no nisehoan'io vaky trano io. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
Mada (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'ireo hira entiny ao koa anefa ny «Ilazao», «Raha hiverina», «Tokotanibe», «Andro hafa», «Ianao ihany», miverimberina»…
Manoloana ny kanto entin'ny mpanakanto eny an-tsehatra dia niezaka tamin'ny fametrahana ny haingo sy ny fanamafisam-peo ho raitra ny Mada pro sy ny P mpikarakara ny fampisehoana. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
maroanaka (nitranga in-1) : Lasan'ireo mpangalatra tamin'izany ny kojakoja fampiasa amin'izao amponga maroanaka miaraka amin'ny amponga vitsivitsy. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
niarahany (nitranga in-1) : Nampaha- fantariny omaly tetsy amin'ny CGM Analakely ny rakikira sy rakitsary niarahany namokatra tamin'ny mpanakanto roa dia ny «HAT» an'i Tongue Nat sy ny «Tantsaha» an-dRajery. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
zona (nitranga in-1) : Noho io antony dia mbola mihazona ny fanapahan-keviny ny hitazona ny fanilihana an'i Madagasikara amin'ny fandraisany anjara amin'ireo asa sahanin'ny Vondrona Afrikanina ary mita- zona ny sazy nampiharina tamin'i Madagasikara ny Cps», araka ny voalaza ao anatin'ity fanambarana ity. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
amelomany (nitranga in-1) : «Asa tena isan-karazany no amelomany anay ankohonany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hibatana (nitranga in-1) : Tournoi Leader U13
Lalao famaranana hibatana ondry: FC 2L # 3 ME Vétéran: UEST 67 ha # Lion Sport. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
informatika (nitranga in-1) : MATEMATIKA
Mahaliana olona maro ny fampirantiana momba ny taranja matematika sy ny informatika, karakarain' ny mpianatra eny amin' ny Oniversiten' Antananarivo, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Tapatapany)
nisian' (nitranga in-2) : Nanampy izany koa ny efa nisian'ny fotoana niarahan'ireo mpilalaon'ny « Malok'ila » rehetra sy ny vady aman-janany mba hialan'ny elanelana eo amin'izy ireo. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
hodian' (nitranga in-1) : Noho io antony io dia nangataka tamin'ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, ny mba hodian'ity farany eto Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy ireo minisitra eo anivon' ny ankolafy Ravaloma-nana saingy mbola tsy nahazo valiny nahafa-po momba izany. (Sombiny)
Rajemisa (nitranga in-1) : Hitondra endrika vaovao ao anatin'ny fikarohana nataon-dry Henry, Cristel, Rajemisa, Mamisoa, Fenosoa ary Pepe ity fampisehoana ity, izay haneho ny «hira gass jazz». (Faran’ny herinandro)
manafangaro (nitranga in-1) : «Karazana akora araraka ao anaty solitany izy io, ka raha misy manafangaro gazoala na solika amin'ny solitany asiana azy io dia tratra any anaty fitsirihana. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
nanamarika (nitranga in-1) : Ankoatra ireo hira taloha nahafantarana ny tarika toy ny «tao an-tsekoly», «Adama sy Eva», «Rock Sos», «Raosy jamba»… sy ireo hira nanamarika ny faha-25 taona toy ny «Lolo», «Tody», «Miha mafana ny tany»… dia hoentin'ny tarika ao anatin'ity seho ity ihany koa ireo hiaka farany tamin'ilay rakikira «maninona moa», izay nivoaka tamin'ny taon-dasa. (Faran’ny herinandro)
fanovàna (nitranga in-1) : Ny momba ireo fanovàna endrika ny ankizy no tiana holazaina eto, rehefa manao «carnaval». (Dia aza gaga ianao!)
hamoahana (nitranga in-1) : Hisy fivoriam-ben'ireo mpitarika klioba kosa hatao ny talata 19 febroary, hahafantarana ny isa azon'ny ekipa tsirairay sy hamoahana ny filaharana mba hamaritana ireo lalao amin'ny lalao am-pahavalon-dalana, hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon'andraikitra teknika ao amin'ny Fimita. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Côte (nitranga in-2) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
Coum (nitranga in-1) : lalao fito no hifandimby etsy amin'ny kianjan'ny Coum 67 ha amin'ny alahady tontolo andro, amin'ilay Tournoi Donabe 192 fokon- tany, karakarain'ny CEPA. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
maikan' (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
R. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Nitondra (nitranga in-1) : Tsy afaka miantsena
Nitondra fiovana maro teo amin'ny fiainan'i Raly ny lazany teo amin'ny sarimihetsika. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
taksibe (nitranga in-1) : Ny Malagasy, izay efa sahirana vao mahita Ar 400 handoavana taksibe, kanefa ireo olon'ny tetezamita resahan'ny UA ireo aza mahavita mive-zivezy any ivelany any hatrany. (Sazin’iza)
nianjeran' (nitranga in-1) : toerana iray eny Ambohirimanjaka no nisian'ilay loza
Ramatoa iray 54 taona no maty nianjeran'ny trano tetsy Ambohitrimanjaka, ao amin'ny fokontany Beloha omaly alina tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
Ankadifotsy (nitranga in-1) : UFA (Vehivavy) # FCA Ankadifotsy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nampiavaka (nitranga in-1) : Isan'ny nampiavaka ny hetsika omaly kosa ny fisian'ilay boky volamena mirakitra ny andron'ny mpifankatia mipetraka ho tantara eo anivon' ny kaominina. (Tapatapany)
Andranomahery (nitranga in-1) : Promotion Tsaramasay # Olympic Lyonnais Ankorondrano Andranomahery. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
hanatanterahana (nitranga in-1) : Efa misy ny orinasa vonona ny hanampy ny federasiona hanatanterahana izany”, hoy i Norolalao Ramanantsoa. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
nanaovana (nitranga in-5) : Mbola ifandroritana eny amin'ny Fitsarana hatramin'izao ilay lalao « villa JJ » na loka trano mitentina Ar 90 tapitrisa eny Ivato, nanaovana lalao fisarihana ny 01 mey 2012. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nanana (nitranga in-2) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
R. (Faran’ny herinandro)
Romain (nitranga in-1) : Eo koa no haingana hijerena azy ireo raha sendra marary », hoy Dr Raherison Romain Aristide, ao amin'ny Hjra. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
hampiova (nitranga in-1) : Noma-rihany ihany anefa fa «ny fifanarahana politika no mety hampiova izay fampiharana ny lalàna izay». (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
nentina (nitranga in-1) : Nobataina haingana izy dia nentina tany amin'ny hopitaly aloha. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
lefitry (nitranga in-1) : Tsy misy azo lazaina mihoatra izay anefa aloha ny votoantin'ny famotorana», hoy ny kaomisera Rakotobe Hery Vola Andry, lefitry ny lehiben'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra, etsy Isotry. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
dingan' (nitranga in-1) : Mbola eo amin'ny dingan' ny fifanintsanana izao amin' ity fifaninanana iadiana omby matavy ity. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Newsman (nitranga in-2) : “Tsy maintsy arahi-maso akaiky ny fivoaran' io andian-drahona io satria ahiana hivadika rivo-doza”, hoy i Newsman Priscoffe, avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
fehezy (nitranga in-1) : Lasa fehezin'ny fiarahamonina sy ireo mpankafy ny fiainanao», hoy ihany ny fanamarihana noentiny. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Antsahamamy (nitranga in-2) : FCG Analamahitsy # Tafaray Antsahamamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nandà (nitranga in-1) : “Tsy afaka nandà intsony, ary samy niaiky ny hadisoana nataony ireto olona voasambotra ireto”, hoy ihany ny tatitra voaray teo anivon'ny polisim-pirenena. (Fenoarivo – Sarona ireo olona telo mpamatsy rongony)
pirenena (nitranga in-2) : SAMY HAKA HO AZY > Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy afaka ny hifano- hana amin'ny fifidianana ireo kandidà ho Filoham- pirenena sy ireo kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fomba fijerin'ny mpahay lalàna, Honoré Rakotomanana. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
hotanterahina (nitranga in-1) : asa lehibe no hotanterahina amin'ilay lalana nihotsaka hatramin'ny 24 desambra teo etsy Anosy. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
dikan' (nitranga in-2) : «Tsy misy idiran'ny politika akory fa Harena Ankibon'i Tongue no dikan'ny HAT eto», araka ny fanazavany. (Tsitokotoko)
Ranaivoarisoa (nitranga in-1) : Fanatsarana ny tetikady amin'ny zava-mahadomelina sy zava-mahamamo no anton'ireo », hoy Ranaivoarisoa Tiarison, Mpitandrina sady filohan' ny Vokovoko manga, tetsy Analakely, omaly. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
jeren' (nitranga in-1) : «Anisan'ny tena tiako teo aloha ny mijery fampisehoana fa lasa tsy misy ambiansy intsony satria lasa ianao ihany koa no jeren'ny olona ao anatin'ny fampisehoana», hoy hatrany izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nieritreretana (nitranga in-1) : Tsy nisy fotoana nanaovana na nieritreretana na inona na inona mihitsy teo. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Raherison (nitranga in-1) : Eo koa no haingana hijerena azy ireo raha sendra marary », hoy Dr Raherison Romain Aristide, ao amin'ny Hjra. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Andohalo (nitranga in-2) : Lion Sport Andohalo # Prosoja Antsahameva. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
GMMC (nitranga in-1) : Mpanakanto maromaro no miara-miasa amin'i Tongue tamin'ity rakikira ity ka anisan'ireny ry Anyah, Kougar, Raj, Marion ary GMMC. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
fampiasa (nitranga in-1) : Lasan'ireo mpangalatra tamin'izany ny kojakoja fampiasa amin'izao amponga maroanaka miaraka amin'ny amponga vitsivitsy. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
tampo (nitranga in-2) : Nahatratra 300 mahery izy ireo notronin'ny ray aman-dreny sy ny mpiray tampo amin'ireo zaza manana fahasembanana. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nampandre (nitranga in-1) : Safotra
Avy nampandre ny polisy indray ny vadiny vao nihazakazaka namonjy azy tany amin'ny Hjra. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Jimmy (nitranga in-1) : Nofantenan'izy ireo amin'izany ireo hira miresaka ny fitiavana amin'ny lafiny rehetra ka niantsoana an-dry Anyah, Jimmy Harrison, Nathan sy Malalanirainy (The one) ary Safidy (123). (Faran’ny herinandro)
nahafantarana (nitranga in-3) : Tendrena avokoa ireo hira ireo ary nivelatra kokoa nefa tsy miala lavitra amin'ny Rap nahafantarana azy hatramin'izay. (Faran’ny herinandro)
Acem (nitranga in-1) : Frero Ambohipo # Acem Fort Duchesne. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Randrianantoanina (nitranga in-1) : Naterinay tany amin'ny polisy izy», hoy Randrianantoanina Fidèle, tompon'andraikitry ny filaminana ao anatin'ny fokontanin'i Antohamadinika-atsimo tonga teny an-toerana. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Niova (nitranga in-1) : Niova ho zavatra hafa mihitsy anefa izany ankehitriny satria misy ireo ankizy no ampanaovina fanamiana miaramila sy misaron-tava ary mitondra «kalachnikov». (Dia aza gaga ianao!)
andavanandrony (nitranga in-1) : Anisan'ireo fiainana andavanandrony taloha tsy ataony intsony amin'izao fotoana ny fiantsenana, indrindra ireo entana na zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny sakafo… Nomarihiny rahateo fa «misy ny zavatra tsy maintsy apetraka amin'ny fiarahamonina. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
gazoala (nitranga in-3) : fombafomba sy pitso- pitsony sisa dia hivoaka ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fomba hamahana ny olan'ny gazoala nampitaraina ireo mpanjifa fa ratsy kalitao. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
fotodrafitrasa (nitranga in-1) : FIDIOVANA AMPI-TOMBOINA
Isan'ny nanao fanamby ny amin'ny fampi-tomboana ny fotodrafitrasa fidiovana ny fikambanana WaterAid amin'ity taona ity. (Tapatapany)
hamafa (nitranga in-1) : tsy milefitra amin'ny heviny ny CPS raha tsy tafody Ravalomanana
Tsy hamafa ny sazy nampiharina tamin' i Madagasikara mihitsy ny Vondrona Afrika-nina raha tsy mody eto Mada- gasikara ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Rakotomanana (nitranga in-2) : »Tsy afaka miditra ao amin'ireo orinasa ireo ny olona ahenoana fofon- toaka ary efa nametahana takelaka ireny ho fijoroana vavolombelona », hoy kosa Rakotomanana Tahiry, tonian'ny sampana. (Sombiny)
nampianjera (nitranga in-1) : «Tao anatin'ilay ora-mikija no nampianjera ilay trano. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
mombana (nitranga in-1) : Mbola natao fanadihadiana mombana halatra kojakojana fiara izy ankoatra ny halatra fiara mahavoarohirohy azy. (Tapatapany)
Namehana (nitranga in-1) : Sandratra (Vehivavy) Amboma # AS Jemico Sabotsy Namehana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Group (nitranga in-1) : CEMES SOANIERANA
«Miaraka ao anatin'ny fitiavana» ry Rootsy Mozika, Haihaingo, Passi Flore ary Ts'art Dihy Mpanakanto efatra samy manana ny talentany sy ny hanitra ho azy no hiara-dia eny amin'ny Cemes Soanierana anio alina manomboka amin'ny 9 ora ao anatin'ny hetsika ho an'ny fetin'ny mpifankatia atolotry ny Success Group «Miaraka ao anatin'ny fitiavana». (Faran’ny herinandro)
zamita (nitranga in-1) : Hatreto aloha dia ireo mpikambana sasantsany eo anivon'ny Parlemantan'ny tete- zamita no isan'ireo voakasik' izay raharaha fanodinkodinam-bolam-bahoaka izay. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
namonjy (nitranga in-1) : Safotra
Asongady (nitranga in-1) : Asongadin'izy ireo ao anatin'ny fampirantiana ny tena lanjan'ny matematika marina eo amin'ny fiainana andavanandro. (Tapatapany)
Dôme (nitranga in-1) : Io no niantson'i Fidy Rabearisoa ny hetsika izay hatolony ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia, anio alina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany, ao amin'ny Dôme Rta Ankorondrano. (Faran’ny herinandro)
Digital (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2005 no teraka ny tantarany sy ny sarimihetsika satria anisan'ireo mpilalao 10 notsongain'ny Scoop Digital tamin'ireo olona 200 mahery nisoratra anarana hifaninana hilalao tamin'ilay tantara mitohy «Jiaby jiaby» izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
kaomisarian' (nitranga in-2) : Tamin'io andro io ihany dia efa nohazomina sy natao fanadihadiana tetsy amin'ny biraon'ny polisin'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra etsy Isotry ity voarohirohy ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Manalinarivo (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
fanambaràna (nitranga in-1) : Io no isan'ny fepetra nisongadina tao anatin'ny fanambaràna nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny Filankevi-pilaminan' ny vondrona Afrikanina (Cps) nivoaka ny alarobia lasa teo. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Ambatovy (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
Efa nandefa ny dikan' ny faktiora mahakasika ny varotra nataony tao anatin'ny telo volana fahefatry ny taona 2012, eo anivon'ny foibem-pitondram-paritry ny minisiteran'ny Harena an-kibon'ny tany ao Toamasina, ny orinasa Ambatovy. (Tsitokotoko)
anaovany (nitranga in-1) : Mbola tazana ety ivelan'ny akanjo anaovany kosa ny faritra mivonto nanaovana ny fandidiana azy ireo. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
idiran' (nitranga in-1) : «Tsy misy idiran'ny politika akory fa Harena Ankibon'i Tongue no dikan'ny HAT eto», araka ny fanazavany. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
fiatrehana (nitranga in-1) : Hita soritra teny amin'ny endriky ry Njila, Ramaka, Mamy ny fahavononana amin'ny fiatrehana ny seho tokana ao anatin'ny fankalazana ny faha-35 taonan'ny tarika Njila ny alahady 17 febroary izao, etsy amin'ny lapan'ny Kolontsaina Mahamasina, amin'ny 3 ora tolakandro. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
zafikely (nitranga in-1) : Io toerana maha renibe io dia ahafahany kokoa mandahatra ny fandaharam-potoanany amin'ny vady aman-janaka sy ireo zafikely an-daniny; amin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny fampisehoana an-kilany. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
fantadaza (nitranga in-1) : «Voaroba tato ny ankamaroan'ireo zava-maneno fampianaranay», hoy i Volahasiniaina, mpanakanto fantadaza amin' ny fitendrena valiha sy aponga lava no sady mpampianatra eo anivon'ity ivon-toerana ity. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
nampahatsiaro (nitranga in-1) : Hay moa ka ilay toetran' olona manana fandeferana no notadiavina tamin'ilay tantara», hoy izy nampahatsiaro ny dingana voalohany nidirany teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Nathan (nitranga in-4) : Tonga ny fotoana ka raikitra amin'izay ny fiaraha-miasan'i Nathan, ilay nandrombaka ny fandresena tamin'ny fifaninanana The One – ilay feo tsara indrindra- nokarakarain'ny Rta, sy ny mi'Ritsoka Production. (Faran’ny herinandro)
handrafitra (nitranga in-2) : «Navoaka maimaika fotsiny ka tsy feno ny fepetra rehetra arahina momba ny toetra amam-panahy tokony hananan' ireo mpikambana handrafitra ny Ffm sy ny tanjona tratrarin'ny Ffm ary ny fomba noentina nana- ovana izany», araka ny voafaritra ao anatin'ny fanambarana navoa-kan'izy ireo, omaly. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Rakotoarivelo (nitranga in-1) : Ny filohan'ny Kaongresin'ny tetezamita sady mpitarika ny delegasion'ny ankolafy Ravalomanana, Mamy Rakotoarivelo, indray dia nilaza fa «efa mazava izany ny hevitry ny Vondrona afri-kanina fa tsy maintsy hampiharina io andininy io raha tsy izany dia mitoetra foana ny sazy». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
ANALAKELY (nitranga in-2) : LE GLACIER – ANALAKELY
Fampisehoana mozika sy lamaody entin'i Onja Etsy amin'ny Le Glacier Analakely indray anio alina no ahitana an'i Onja, izay haneho ireo mozika mafana amin'ny endrika hafa kely. (Faran’ny herinandro)
DOME (nitranga in-1) : DOME RTA – ANKORONDRANO
Nobataina (nitranga in-1) : Nobataina haingana izy dia nentina tany amin'ny hopitaly aloha. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Randrianarivony (nitranga in-2) : Ny Fitsarana no hanapaka izay ho tompony », hoy i Jaobarison Randrianarivony mpiara-nanatontosa ny lalao. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
tapaky (nitranga in-1) : Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika mihitsy ireo olona roa ireo ny tapaky ny volana mey hatramin'ny jona 2012 noho io lalao io izay marihina fa nandraisana mpilalao an'hetsiny anjara tamin'izany. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
hifanandrina (nitranga in-1) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
Barphil (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Tiany (nitranga in-1) : Tiany ny loko volomparasy matsatso sy ny fotsy ary ny mainty ary ny hazan-dranomasina ny sakafo tena ankafiziny indrindra. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nitaky (nitranga in-1) : Mba hisian'ny fanaraha-maso akaiky ny fifidianana dia nitaky ny fanamafisana ny biraom-pifandraisana irai-sam-pirenena misolo tena ny vondrona Sadc eto Madagasikara ny Cps. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
nividianana (nitranga in-1) : «Teny amin'ny friperia no nividianana ny ankamaroan' ireo ankanjo nampiasaina tamin'ireo horonantsary ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Voakasika (nitranga in-1) : Voakasika avokoa ny faritra Boeny, Melaky, Menabe ary miitatra hatraty afovoan-tany. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
tale (nitranga in-3) : Amin'ny alatsinainy izao no hanombohana ny asa ary haharitra iray volana eo ho eo”, hoy Andriatsilavo Zo, tale teknika eo anivon'ny Cua. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
nohodidy (nitranga in-1) : Vetivety teo dia nohodidin'ireo teo amin'ny manodidina avy hatrany ny tranon'ity lehilahy voatondro ho namono an-dRakotoarisoa Joseph François ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hanaovan' (nitranga in-1) : Ho fanamafisana izay fanapahan-kevitra izay dia mitaky ny hanaovan'ny filohan'ny vaomieran'ny Vondrona Afrikanina sy ny vondrona Sadc tatitra momba ny firoson'ny fifampidinihana eo amin'ny fampiharana io andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy fepetra ny Filoha teo aloha io ny Cps farafahatarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
delegasion' (nitranga in-1) : Ny filohan'ny Kaongresin'ny tetezamita sady mpitarika ny delegasion'ny ankolafy Ravalomanana, Mamy Rakotoarivelo, indray dia nilaza fa «efa mazava izany ny hevitry ny Vondrona afri-kanina fa tsy maintsy hampiharina io andininy io raha tsy izany dia mitoetra foana ny sazy». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Etoile (nitranga in-2) : Action Ampandrana # Etoile filante Alarobia. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
manga (nitranga in-2) : liana amin'ny fiaraha- miasa amin'ireo fikambanana na orinasa sy olon-tsotra ary mpivarotra samihafa ny sampana Vokovoko manga eo anivon'ny Fjkm. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
peux (nitranga in-1) : Santionany amin'ireny ny «Si j'avais un marteau», «A présent tu peux ton aller», «Reviens vite et oublie»… Mpahay zava-maneno 16 mirahalahy kosa no hanaraka azy ireo amin'ny mozika ary handravaka izany ny dihy sy soradihy ary tantara an-tsehatra miaraka amin'ireo mpandihy 8 mianadahy avy amin'ny Dj'Ampela, D1…. (Faran’ny herinandro)
hanombohana (nitranga in-1) : Amin'ny alatsinainy izao no hanombohana ny asa ary haharitra iray volana eo ho eo”, hoy Andriatsilavo Zo, tale teknika eo anivon'ny Cua. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
Henry (nitranga in-2) : Nambaran'Andriamamonjy Evariste Henri, avy amin'ny minisiteran'ny Asa vaventy kosa fa ny tsy fahampian'ny vola no nahatonga ny asa niandry. (Faran’ny herinandro)
Razanamahasoa (nitranga in-1) : Fananam-bahoaka izany ary melohin'ny lalàna ny fandrombana azy», hoy ny minisitry ny Fitsarana, Christine Razanamahasoa. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
fahavononana (nitranga in-2) : Hita soritra teny amin'ny endriky ry Njila, Ramaka, Mamy ny fahavononana amin'ny fiatrehana ny seho tokana ao anatin'ny fankalazana ny faha-35 taonan'ny tarika Njila ny alahady 17 febroary izao, etsy amin'ny lapan'ny Kolontsaina Mahamasina, amin'ny 3 ora tolakandro. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
namonoan' (nitranga in-1) : Hatreto dia tsy mazava amin'ireo fianakaviana no antony namonoan'ity rahalahiny am-panambadiana an-dRakotoarisoa Joseph François. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
FIARA (nitranga in-1) : hALATRA FIARA > Sarona ny olona nangalatra ilay fiara Peugeot 309, tetsy Analama- hitsy. (Tapatapany)
Sadc (nitranga in-2) : Ho fanamafisana izay fanapahan-kevitra izay dia mitaky ny hanaovan'ny filohan'ny vaomieran'ny Vondrona Afrikanina sy ny vondrona Sadc tatitra momba ny firoson'ny fifampidinihana eo amin'ny fampiharana io andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy fepetra ny Filoha teo aloha io ny Cps farafahatarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Fanatic (nitranga in-1) : a Ankazomanga avaratra # Fanatic Ankorondrano atsinanana. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Anatihazo (nitranga in-2) : Pacifique Fort Duchesne # CC Club Anatihazo Isotry. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hiasa (nitranga in-2) : «Ilay nenintoako handeha hiasa mara-ina no nahita ny varavaran- kely vaky», hoy i Volaha-siniaina. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Fimita (nitranga in-2) : fihaonan'ny ekipa roa nandray anjara tamin'ny alahady teo
Tamin'ireo ekipa 24 nandray anjara tamin'ity kitra lalaovin'olona fito, karakarain'ny Fimita na (Fikambanana mitaiza tanora Ankazomanga) ity dia nisy telo niala an-daharana noho izy ireo efa resy intelo sahady. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Françis (nitranga in-3) : cCESCA – ANTANIMENA
Natao (nitranga in-1) : Natao izany mba hahafahana mandinika eo anivon'ny vaomieran'ny famatsiam- bola goavana amin'ny harena an-kibon'ny tany (Cgim) ny fahamarinan' ireo faktiora ireo sy ny tamberim-bidy tokony haloan'Ambatovy manoloana ireo vokatra efa naondrany. (Tsitokotoko)
François (nitranga in-6) : Rakotoarisoa Joseph François, no anaran'io olona maty voatsindrona antsy teo amin'ny fony. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Nanilika (nitranga in-2) : Nanilika andraikitra
Nanilika ny andraikitra any amin'ilay toeram-pivarotana nivarotra io laharan-tariby io ilay orinasam-pifandraisana rehefa nanontaniana. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
anatrehan' (nitranga in-2) : Na izany aza, mahatsapa ity mpilalao ity fa manana fandeferana na eo anatrehan'ny mpilalao hafa na eo anatrehan'ny fiarahamonina ireo vady aman-janany. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
vitan' (nitranga in-2) : “Tsy maintsy niandrasana famatsiam-bola ny asa satria tsy vitan'ny Cua irery. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
2012 (nitranga in-3) : Mbola ifandroritana eny amin'ny Fitsarana hatramin'izao ilay lalao « villa JJ » na loka trano mitentina Ar 90 tapitrisa eny Ivato, nanaovana lalao fisarihana ny 01 mey 2012. (Tsitokotoko)
namonoany (nitranga in-1) : Tsy nisy antony tokony ho namonoany azy mihitsy», hoy ireo zanaky ny maty. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nangataka (nitranga in-1) : Noho io antony io dia nangataka tamin'ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina, ny mba hodian'ity farany eto Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy ireo minisitra eo anivon' ny ankolafy Ravaloma-nana saingy mbola tsy nahazo valiny nahafa-po momba izany. (Sombiny)
Helmine (nitranga in-1) : tSY FAHASALAMANA > Nanomboka ny 12 fe-broary lasa teo no niditra hopitaly, noho ny fiakaran' ny tosi-dra sy ny aretim-po nahazo, Razaiarivelo Helmine, renin'i Lalao Ravalomanana. (Sombiny)
Olympic (nitranga in-1) : Promotion Tsaramasay # Olympic Lyonnais Ankorondrano Andranomahery. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
nidirany (nitranga in-1) : Hay moa ka ilay toetran' olona manana fandeferana no notadiavina tamin'ilay tantara», hoy izy nampahatsiaro ny dingana voalohany nidirany teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
band (nitranga in-1) : Toy izany koa ny «Fanambalia», «Tsisy quoi»…
CGM – ANALAKELY Full Vao band haneho amin'ny jazz ilay seho «Ny mazava» Aingam-panahy avy amin'ny tantara an-tsehatra iray «Ny mazava», no entin'ny tarika Full Vao Band, etsy amin'ny CGM Analakely, ny sabotsy 16 febroary manomboka amin'ny 5 ora hariva. (Faran’ny herinandro)
baovao (nitranga in-1) : “Tsy tonga izy ireo ary tsy nahenoana akony hatramin'ny nialanay teny Ivato”, hoy ny loharanom- baovao avy tamin'ireo delegasiona malagasy mpitsena teny amin'ny seranam-piaramanidina. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
Hanentana (nitranga in-1) : Hanentana sy hanafana izany ny Rootsy Mozika. (Faran’ny herinandro)
vite (nitranga in-1) : Santionany amin'ireny ny «Si j'avais un marteau», «A présent tu peux ton aller», «Reviens vite et oublie»… Mpahay zava-maneno 16 mirahalahy kosa no hanaraka azy ireo amin'ny mozika ary handravaka izany ny dihy sy soradihy ary tantara an-tsehatra miaraka amin'ireo mpandihy 8 mianadahy avy amin'ny Dj'Ampela, D1…. (Faran’ny herinandro)
azon' (nitranga in-2) : Loka tokana azon'ity mpanakanto ity ny fandraisan'ny mi'Ristoka ny fitantanana azy eo amin'ny sehatry ny mozika. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
ahenoana (nitranga in-1) : »Tsy afaka miditra ao amin'ireo orinasa ireo ny olona ahenoana fofon- toaka ary efa nametahana takelaka ireny ho fijoroana vavolombelona », hoy kosa Rakotomanana Tahiry, tonian'ny sampana. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
nahasarika (nitranga in-1) : Anisan'ny nahasarika azy hatrany ny anjara toeran'ireo renim-pianakaviana ao anatin'ny tantara. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
tadiavy (nitranga in-1) : «Ny tsy hisian' ny filaminana eto amintsika mihitsy, angamba, no tena tadiavin'izy ireo. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
rock (nitranga in-2) : PIMENT CAFÉ – BEHORIRIKA
Fanahisoa (nitranga in-1) : Hisy fivoriam-ben'ireo mpitarika klioba kosa hatao ny talata 19 febroary, hahafantarana ny isa azon'ny ekipa tsirairay sy hamoahana ny filaharana mba hamaritana ireo lalao amin'ny lalao am-pahavalon-dalana, hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon'andraikitra teknika ao amin'ny Fimita. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
MPILALAO (nitranga in-1) : zARY RAIKI-TAMPISAKA AO AN-TSAIN'NY MPANKAFY NY TANTARA «MALOK'ILA» NY FANAMBADIAN-DRAJAO SY RALY, HANY KA MISY MITADY HANAFANGARO IZANY HATRANY AMIN'NY FIAINANA ANDAVANANDRON'IREO MPILALAO SARIMIHETSIKA IREO. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nitondrana (nitranga in-1) : Tafiditra tamin'ny fametrahana ny tantara sy ny tena izy ny nitondrana ireo vady aman-janaka nanatrika ny fandraisana ny sary ho an'ireny horonantsary ireny mba hahafantaran'izy ireny ny zava-misy ao anatin'io tontolon'ny sarimihetsika io. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nihinana (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Noël (nitranga in-2) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
Pistorius (nitranga in-3) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
Naiditra am-ponja i Oscar Pistorius Atleta afrikanina tatsimo iray tapa-tongotra roa saingy mihazakazaka amin'ny solon-tongotra, izay niatrika ny Lalao Olympika sy ny Lalao Paralympika farany teo, no nosamborin'ny polisy tao amin'ny tranony, taorian'ny nahafatesany tsy nahy ny sakaizany. (Any andafy)
Barcia (nitranga in-1) : a Ankazomanga avaratra # Barcia Ankazomanga atsimo. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
hialan' (nitranga in-1) : Nanampy izany koa ny efa nisian'ny fotoana niarahan'ireo mpilalaon'ny « Malok'ila » rehetra sy ny vady aman-janany mba hialan'ny elanelana eo amin'izy ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
fitananana (nitranga in-1) : Tafiditra amin'ny fiaraha-miasa ny fitananana an'i Nathan amin'ny lokon'ny mozika hironany, ny fandrindrana, fandraisam-peo, famoahana rakikira sy ny fikarakarana fampisehoana. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
nahavita (nitranga in-1) : nahavita ny diabe vitan'ny olona tsy manana fahasembanana ireo mpianatra omaly. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Mbabane (nitranga in-2) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
aponga (nitranga in-1) : «Voaroba tato ny ankamaroan'ireo zava-maneno fampianaranay», hoy i Volahasiniaina, mpanakanto fantadaza amin' ny fitendrena valiha sy aponga lava no sady mpampianatra eo anivon'ity ivon-toerana ity. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
asehon' (nitranga in-2) : Ireo karazan-damaody tena malagasy sy vita amin'ny akora malagasy kosa no asehon'ny Haihaingo, izay tarihin'i Hanitra Andriamboavonjy. (Faran’ny herinandro)
Joseph (nitranga in-9) : Rakotoarisoa Joseph François, no anaran'io olona maty voatsindrona antsy teo amin'ny fony. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
noteneny (nitranga in-1) : Ankon'ny ranomaso ary safotra mihitsy anefa izy vao notenenin'ireo mpitsabo teo amin'ny sampana vonjy taitran'ny Hjra hoe fa efa ao amin'ny tranom-paty ny razana», hoy i Hetsiavitra Victorienne, lehiben'ny vakim-paritra fahatelo ao anatin'ity fokontany, izay nitondra ny vadin'i Joseph tany amin'ny hopitaly. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
kojakojana (nitranga in-1) : Mbola natao fanadihadiana mombana halatra kojakojana fiara izy ankoatra ny halatra fiara mahavoarohirohy azy. (Tapatapany)
nitondra (nitranga in-1) : Ankon'ny ranomaso ary safotra mihitsy anefa izy vao notenenin'ireo mpitsabo teo amin'ny sampana vonjy taitran'ny Hjra hoe fa efa ao amin'ny tranom-paty ny razana», hoy i Hetsiavitra Victorienne, lehiben'ny vakim-paritra fahatelo ao anatin'ity fokontany, izay nitondra ny vadin'i Joseph tany amin'ny hopitaly. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Sainte (nitranga in-1) : Sainte Marie Ankazomanga Andraharo # Zandrikely Tsaramasay. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
nandraisana (nitranga in-1) : Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika mihitsy ireo olona roa ireo ny tapaky ny volana mey hatramin'ny jona 2012 noho io lalao io izay marihina fa nandraisana mpilalao an'hetsiny anjara tamin'izany. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
natombokay (nitranga in-1) : «Efa nisy asa natombokay tapa-bolana talohan' izao. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
nofotoranay (nitranga in-1) : «Niaiky fa nanatsatok'antsy an-dRakotoarisoa Joseph François izy rehefa nofotoranay. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
horonantsary (nitranga in-4) : Reny feno fitiavana izy na ao anatin'ny horonantsary na amin'ny fiainana andavanandro. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
tokontany (nitranga in-1) : Tazana avy eo aminay mantsy ny tokontanin'izy ireo», hoy hatrany ity lehilahy ity. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
handoavana (nitranga in-1) : Ny Malagasy, izay efa sahirana vao mahita Ar 400 handoavana taksibe, kanefa ireo olon'ny tetezamita resahan'ny UA ireo aza mahavita mive-zivezy any ivelany any hatrany. (Sazin’iza)
William (nitranga in-3) : cl Razafindrakoto William, tale misahana ny fanatanjahantena sy tanora ary fialam-boly ao amin'ny Cua
Fanomezan-danja ny sehatry ny fanatanjahantena. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Morondava (nitranga in-1) : Jaguar Antohomadinika # FTM Morondava Ambohimanarina. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Hetsiavitra (nitranga in-1) : Ankon'ny ranomaso ary safotra mihitsy anefa izy vao notenenin'ireo mpitsabo teo amin'ny sampana vonjy taitran'ny Hjra hoe fa efa ao amin'ny tranom-paty ny razana», hoy i Hetsiavitra Victorienne, lehiben'ny vakim-paritra fahatelo ao anatin'ity fokontany, izay nitondra ny vadin'i Joseph tany amin'ny hopitaly. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
WaterAid (nitranga in-1) : FIDIOVANA AMPI-TOMBOINA
andrarezy (nitranga in-1) : cCESCA – ANTANIMENA
Passy (nitranga in-2) : CEMES SOANIERANA
Avaratry (nitranga in-1) : Haneho ireo karazana dihy nentin-drazana avy any amin'iny faritra Avaratry ny Nosy iny kosa ry Passi Florre, izay ahitana andriambavilanitra 22 ka anisan'ny asehon'izy ireo amin'izany ny Ouadraha. (Faran’ny herinandro)
Junior (nitranga in-1) : AS Junior Betongolo # PSG Ambohitrakely. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Rarihasina (nitranga in-1) : MATEMATIKA
Priscoffe (nitranga in-2) : “Tsy maintsy arahi-maso akaiky ny fivoaran' io andian-drahona io satria ahiana hivadika rivo-doza”, hoy i Newsman Priscoffe, avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Datita (nitranga in-1) : Ny teto an-toerana, izay nahitana an'i Hery sy Datita Rabeson, dia efa ela no nanomana fatratra ity seho ity, indrindra taorian'ny fandalovan'i Njila teto an-tanindrazana, ny faran'ny taona teo. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
Razaiarivelo (nitranga in-1) : tSY FAHASALAMANA > Nanomboka ny 12 fe-broary lasa teo no niditra hopitaly, noho ny fiakaran' ny tosi-dra sy ny aretim-po nahazo, Razaiarivelo Helmine, renin'i Lalao Ravalomanana. (Sombiny)
Banjay (nitranga in-3) : Faneva Antaninandro # Banjai Ambatomaro. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nampitaraina (nitranga in-1) : fombafomba sy pitso- pitsony sisa dia hivoaka ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fomba hamahana ny olan'ny gazoala nampitaraina ireo mpanjifa fa ratsy kalitao. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
noforonina (nitranga in-1) : Ho an'i Tongue Nat dia efa hatramin'ny taona 2009 no namolavolany ity rakikira ity ary hira 28 no noforonina, ka ny 14 no nampidirina ao anatin' ity vokatra ity. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Notifiry (nitranga in-1) : Notifirin'ny jiolahy namaky ny tranony, teo amin'ny fony izy. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
nahita (nitranga in-3) : «Ilay nenintoako handeha hiasa mara-ina no nahita ny varavaran- kely vaky», hoy i Volaha-siniaina. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
RALY (nitranga in-2) : zARY RAIKI-TAMPISAKA AO AN-TSAIN'NY MPANKAFY NY TANTARA «MALOK'ILA» NY FANAMBADIAN-DRAJAO SY RALY, HANY KA MISY MITADY HANAFANGARO IZANY HATRANY AMIN'NY FIAINANA ANDAVANANDRON'IREO MPILALAO SARIMIHETSIKA IREO. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
tanàna (nitranga in-2) : Betsaka ireo sekoly nanao hetsika samihafa, na kilalao, sahoby, fiaraha-misakafo hatramin'ny filaharam-be mamakivaky ny tanàna. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
sehatry (nitranga in-3) : Loka tokana azon'ity mpanakanto ity ny fandraisan'ny mi'Ristoka ny fitantanana azy eo amin'ny sehatry ny mozika. (Faran’ny herinandro)
notafihan' (nitranga in-1) : Tsy tao amin'ny tranon'io miaramila io ihany anefa no notafihan'ireo jiolahy fa mbola nitety tranon'olona roa hafa izy tao aorian'izany sady nanolana. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Olympika (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
taitran' (nitranga in-1) : Ankon'ny ranomaso ary safotra mihitsy anefa izy vao notenenin'ireo mpitsabo teo amin'ny sampana vonjy taitran'ny Hjra hoe fa efa ao amin'ny tranom-paty ny razana», hoy i Hetsiavitra Victorienne, lehiben'ny vakim-paritra fahatelo ao anatin'ity fokontany, izay nitondra ny vadin'i Joseph tany amin'ny hopitaly. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nandika (nitranga in-1) : Ny sekre-tera nasionalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, aloha omaly, no avy hatrany dia nandika ity fepetra noraisin'ny Cps ity ho «karazana filam-boatsiary mba hisian'ny fitoniana eto Madagasikara». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Cenit (nitranga in-1) : Etsy an-kilan'izay dia nanamafy ny tokony hanajan' ny rehetra ny fahaleovantenan'ny Cenit sy ny tetiandrom-pifidianana ihany koa ity Ffilankevi-pilaminana eo anivon'ny Vondrona Afrika-nina ity. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
hohaniny (nitranga in-1) : « Mahery mihinan-kanina izy roa lahy sady tsy mifidy sakafo mihitsy saingy ny hohaniny indray no tsy maharaka. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Ambatomaro (nitranga in-4) : Baracap Ambatomaro # AS B 52 Ankadindramamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Tsaramasay (nitranga in-5) : a
Fandaharan-dalao FC Lalah Tsaramasay # C. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Raly (nitranga in-10) : Na dia mbola ao anatin'ny hatanorana aza dia efa loa-jafy Raholiarihanta Vololonirina Sahondra, very anarana amin'ny hoe Raly, toerana tazoniny ao anatin'ilay tantara «Malok'ila». (Faran’ny herinandro)
hatraty (nitranga in-1) : Voakasika avokoa ny faritra Boeny, Melaky, Menabe ary miitatra hatraty afovoan-tany. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Ambositra (nitranga in-1) : FANAMBARAM-PANANANA > Omaly no nanatitra ny fanam- baràm-panana tetsy amin'ny Bianco, tetsy Ambohibao, ireo zandary mianatra ao amin' ny sekoly ambonin'ny zandarimaria ao Moramanga sy avy ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra. (Tapatapany)
hamaritana (nitranga in-1) : Hisy fivoriam-ben'ireo mpitarika klioba kosa hatao ny talata 19 febroary, hahafantarana ny isa azon'ny ekipa tsirairay sy hamoahana ny filaharana mba hamaritana ireo lalao amin'ny lalao am-pahavalon-dalana, hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon'andraikitra teknika ao amin'ny Fimita. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
fahampian' (nitranga in-1) : Nambaran'Andriamamonjy Evariste Henri, avy amin'ny minisiteran'ny Asa vaventy kosa fa ny tsy fahampian'ny vola no nahatonga ny asa niandry. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
Toussaint (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
fombafomba (nitranga in-1) : fombafomba sy pitso- pitsony sisa dia hivoaka ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fomba hamahana ny olan'ny gazoala nampitaraina ireo mpanjifa fa ratsy kalitao. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
namolavolany (nitranga in-1) : Ho an'i Tongue Nat dia efa hatramin'ny taona 2009 no namolavolany ity rakikira ity ary hira 28 no noforonina, ka ny 14 no nampidirina ao anatin' ity vokatra ity. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Gilbert (nitranga in-1) : Hisy fivoriam-ben'ireo mpitarika klioba kosa hatao ny talata 19 febroary, hahafantarana ny isa azon'ny ekipa tsirairay sy hamoahana ny filaharana mba hamaritana ireo lalao amin'ny lalao am-pahavalon-dalana, hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon'andraikitra teknika ao amin'ny Fimita. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
gass (nitranga in-1) : Hitondra endrika vaovao ao anatin'ny fikarohana nataon-dry Henry, Cristel, Rajemisa, Mamisoa, Fenosoa ary Pepe ity fampisehoana ity, izay haneho ny «hira gass jazz». (Faran’ny herinandro)
tato (nitranga in-3) : “Ny hamerina indray ny hasin'ny atletisma, izay nidina tato ho ato, no tanjonay ao anatin'ny efa- taona manaraka. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Jamaïque (nitranga in-1) : FC Jamaïque Isotry # ACT 67 ha avaratra. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
hametrahana (nitranga in-1) : Tanjon'ny roa tonta amin'ny fiaraha-miasa ny hametrahana sanganasa maharitra fa tsy hiredareda am-boalohany fotsiny. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
Njarame (nitranga in-2) : « Ny vatana no tafasaraka fa ny fanahy tsy tafasaraka mihitsy », hoy i Njarame, renin'i Mahagaga sy Mahalatsa, na ireo zaza nikambana kibo nosarahina tamin'ny alalan'ny fandidiana. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
taty (nitranga in-1) : « Efa ho adin'ny iray taty aoriana vao tafavoakan'ny fokonolona ny fatin'ilay ramatoa», hoy hatrany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany ity. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
Lalah (nitranga in-1) : a
nandalovan' (nitranga in-1) : Anisan'ny tena nanahirana azy kosa anefa ny ampahan'ny sary tamin'ny «Malok'ila 6», izay nandalovan' izy ireo teny Tsaralalàna. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hahafantaran' (nitranga in-1) : Tafiditra tamin'ny fametrahana ny tantara sy ny tena izy ny nitondrana ireo vady aman-janaka nanatrika ny fandraisana ny sary ho an'ireny horonantsary ireny mba hahafantaran'izy ireny ny zava-misy ao anatin'io tontolon'ny sarimihetsika io. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
zanany (nitranga in-5) : Dia faly ery ireo ray aman-dreny mampiakanjo ny zanany toy izany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
vinavinan' (nitranga in-1) : Anio raha ny vinavinan'ireo polisy eo amin'ny boriborintany fahefatra no atolotra ny Fampanoavana ity rahalahiny am-panambadiana ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
maherifo (nitranga in-1) : Taloha, raha vao nanomboka nahazo vahana teto amin- tsika ny «talata matavy», izay matetika ireo sekoly tsy miankina manompana ny fandaharam-pianarana vahiny no mankalaza izany, dia ireo endrik'olona maherifo amin' ny sary miaina sy ny angano na karazam-biby no hampisalorana ny ankizy. (Dia aza gaga ianao!)
Success (nitranga in-1) : CEMES SOANIERANA
GLACIER (nitranga in-1) : LE GLACIER – ANALAKELY
Highlanders (nitranga in-1) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
notazomina (nitranga in-1) : Voatery notazomina sy arahi-maso etsy amin'ny hopitaly Hjra izy roa lahy, miaraka amin'ny reniny. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
fifanintsanana (nitranga in-1) : Mbola eo amin'ny dingan' ny fifanintsanana izao amin' ity fifaninanana iadiana omby matavy ity. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Donabe (nitranga in-1) : lalao fito no hifandimby etsy amin'ny kianjan'ny Coum 67 ha amin'ny alahady tontolo andro, amin'ilay Tournoi Donabe 192 fokon- tany, karakarain'ny CEPA. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Tongue (nitranga in-4) : Nampaha- fantariny omaly tetsy amin'ny CGM Analakely ny rakikira sy rakitsary niarahany namokatra tamin'ny mpanakanto roa dia ny «HAT» an'i Tongue Nat sy ny «Tantsaha» an-dRajery. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Haruna (nitranga in-1) : Raha ny lisitr'ireo rivo-doza nivoaka hatramin'ny niandohan'ny fahavaratra dia Haruna no mety anarana hisaloran'io andian-drahona io raha mivadika rivo-doza. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Rakotobe (nitranga in-1) : Tsy misy azo lazaina mihoatra izay anefa aloha ny votoantin'ny famotorana», hoy ny kaomisera Rakotobe Hery Vola Andry, lefitry ny lehiben'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra, etsy Isotry. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Volahasiniaina (nitranga in-1) : «Voaroba tato ny ankamaroan'ireo zava-maneno fampianaranay», hoy i Volahasiniaina, mpanakanto fantadaza amin' ny fitendrena valiha sy aponga lava no sady mpampianatra eo anivon'ity ivon-toerana ity. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
karàna (nitranga in-1) : Anisan'ny tena talentany ny famoronana fitafiana karàna sy arabo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nathan (nitranga in-1) : nathan, tompondaka tamin'ny fifaninanana “The One”
Samy avy nandinika. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
RAHOLIARIHANTA (nitranga in-1) : RAHOLIARIHANTA VOLOLONIRINA SAHONDRA NA I RALY NO MANAZAVA NY TENA TOETRA SY NY FOMBA FIAINANY AMIN'NY FILALAOVANA TANTARA SY NY FIAINANA ANDAVANANDRONY. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hamerenana (nitranga in-1) : Ireto farany izay mangataka ny amin'ny tokony hamerenana ny fandinihana ny fomba noentina nanen-dry ireo olona 44 ao anatin'ity rafitra ity. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Nampiseho (nitranga in-1) : Nampiseho ny maha izy azy tamin'ny alalan'ny “diabe ho fanajana ny mahaolona”, nandritra ny Andron'ny sekoly omaly, ireo mpianatra manana fahasembanana. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
mihosona (nitranga in-1) : Ezahina ny tsy miavona nefa koa tsy mihosona be loatra amin'izy ireo». (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
mandaginina (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Tiarison (nitranga in-1) : Fanatsarana ny tetikady amin'ny zava-mahadomelina sy zava-mahamamo no anton'ireo », hoy Ranaivoarisoa Tiarison, Mpitandrina sady filohan' ny Vokovoko manga, tetsy Analakely, omaly. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
Betongolo (nitranga in-1) : AS Junior Betongolo # PSG Ambohitrakely. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
PIMENT (nitranga in-1) : PIMENT CAFÉ – BEHORIRIKA
Fenoarivo (nitranga in-1) : olona telo, nahitana lehilahy roa sy ramatoa lehibe iray, no saron'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadome- lina ambodiomby nivarotra rongony, teny amin'ny faritra Ambo-hijafy Fenoarivo, ny ala-robia 13 febroary teo tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. (Fenoarivo – Sarona ireo olona telo mpamatsy rongony)
Hubert (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
Analakely (nitranga in-5) : Nampaha- fantariny omaly tetsy amin'ny CGM Analakely ny rakikira sy rakitsary niarahany namokatra tamin'ny mpanakanto roa dia ny «HAT» an'i Tongue Nat sy ny «Tantsaha» an-dRajery. (Faran’ny herinandro)
Galaxy (nitranga in-1) : Dakar Ambohimanarina # Galaxy Andraharo. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
hahafantarana (nitranga in-1) : Hisy fivoriam-ben'ireo mpitarika klioba kosa hatao ny talata 19 febroary, hahafantarana ny isa azon'ny ekipa tsirairay sy hamoahana ny filaharana mba hamaritana ireo lalao amin'ny lalao am-pahavalon-dalana, hoy i Gilbert Fanahisoa, tompon'andraikitra teknika ao amin'ny Fimita. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
amperinasa (nitranga in-1) : « Tsy noraisin'io mpivarotra io an-tsoratra ny anaran'ny olona nividy ilay laharana ka niteraka ny olana », hoy ny teo anivon'ity orinasa ity, izay nilaza fa ireo laharana tsy misy anarana kanefa amperinasa taorian'io dia notapahana avokoa. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
Mama (nitranga in-1) : I Mama indray mivarotra», hoy i Tojonirina Heriniaina Alain zanany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nanatsatok' (nitranga in-1) : «Niaiky fa nanatsatok'antsy an-dRakotoarisoa Joseph François izy rehefa nofotoranay. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Boster (nitranga in-1) : a
diabe (nitranga in-2) : nahavita ny diabe vitan'ny olona tsy manana fahasembanana ireo mpianatra omaly. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
HANAFANGARO (nitranga in-1) : zARY RAIKI-TAMPISAKA AO AN-TSAIN'NY MPANKAFY NY TANTARA «MALOK'ILA» NY FANAMBADIAN-DRAJAO SY RALY, HANY KA MISY MITADY HANAFANGARO IZANY HATRANY AMIN'NY FIAINANA ANDAVANANDRON'IREO MPILALAO SARIMIHETSIKA IREO. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
ompainy (nitranga in-1) : Tsy aritro intsony dia nanontany an'i Dada aho hoe ianao ve izany ompainy izany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Andriatsilavo (nitranga in-2) : Amin'ny alatsinainy izao no hanombohana ny asa ary haharitra iray volana eo ho eo”, hoy Andriatsilavo Zo, tale teknika eo anivon'ny Cua. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Club (nitranga in-2) : Pacifique Fort Duchesne # CC Club Anatihazo Isotry. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nanontany (nitranga in-1) : Tsy aritro intsony dia nanontany an'i Dada aho hoe ianao ve izany ompainy izany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Haihaingo (nitranga in-2) : CEMES SOANIERANA
isaky (nitranga in-1) : Voalaza fa hitondra oram-be isaky ny hariva hatramin'ny faran'ny herinandro ity andro ratsy ity. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
hialàna (nitranga in-1) : Ankoatra ny fandokoana ny solitany dia vahaolana iray hafa afaka irosoana hialàna amin'ny ahiahy amin'ny fampifangaroana solitany sy gazoala ihany koa ny fampiasana ny »agent traceur » amin'ny solitany. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
napetraka (nitranga in-2) : Efa napetraka tamin'ny hoe toy ny asa rehetra ihany ny asan'ny mpilalao sarimihetsika, ka izay nahatonga an'i Raly hanamarika fa «avahana tsara ny fitiavana ao anatin'ny tantara sy ny tena fitiavana». (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
Aristide (nitranga in-1) : Eo koa no haingana hijerena azy ireo raha sendra marary », hoy Dr Raherison Romain Aristide, ao amin'ny Hjra. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
ren' (nitranga in-1) : Izany ren'ialahy izany, hoy fotsiny izy tamiko. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nahery (nitranga in-1) : Nitohana hatramin'ny fifamoi- voizana vokatry ny oram-baratra nahery vaika. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
hanajan' (nitranga in-1) : Etsy an-kilan'izay dia nanamafy ny tokony hanajan' ny rehetra ny fahaleovantenan'ny Cenit sy ny tetiandrom-pifidianana ihany koa ity Ffilankevi-pilaminana eo anivon'ny Vondrona Afrika-nina ity. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
tetikady (nitranga in-1) : Fanatsarana ny tetikady amin'ny zava-mahadomelina sy zava-mahamamo no anton'ireo », hoy Ranaivoarisoa Tiarison, Mpitandrina sady filohan' ny Vokovoko manga, tetsy Analakely, omaly. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
Blanches (nitranga in-2) : Ny Akany Orchidées Blanches Androhibe no nikarakara ny hetsika. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Orchidées (nitranga in-2) : Ny Akany Orchidées Blanches Androhibe no nikarakara ny hetsika. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Rakotombelontsoa (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
Jemico (nitranga in-1) : Sandratra (Vehivavy) Amboma # AS Jemico Sabotsy Namehana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Razafindratsara (nitranga in-2) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
taonan' (nitranga in-1) : Hita soritra teny amin'ny endriky ry Njila, Ramaka, Mamy ny fahavononana amin'ny fiatrehana ny seho tokana ao anatin'ny fankalazana ny faha-35 taonan'ny tarika Njila ny alahady 17 febroary izao, etsy amin'ny lapan'ny Kolontsaina Mahamasina, amin'ny 3 ora tolakandro. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
nohevery (nitranga in-1) : Araka ny loharanom-baovao dia noheverin'i Oscar Pistorius fa mpangalatra io olon-tiany io raha niditra tao an-tranony tamin'ny andro alina. (Any andafy)
zariday (nitranga in-1) : RAOZY AN-JATONY
Raozy an-jatony maro no voazaran'ny kaominina Antananarivo renivohitra ho an'ireo mpifankatia teny amin'ny zaridain' Ambohijatovo, Maha- masina sy Masay ary Antaninarenina, omaly. (Tapatapany)
hisaloran' (nitranga in-1) : Raha ny lisitr'ireo rivo-doza nivoaka hatramin'ny niandohan'ny fahavaratra dia Haruna no mety anarana hisaloran'io andian-drahona io raha mivadika rivo-doza. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
hironany (nitranga in-1) : Tafiditra amin'ny fiaraha-miasa ny fitananana an'i Nathan amin'ny lokon'ny mozika hironany, ny fandrindrana, fandraisam-peo, famoahana rakikira sy ny fikarakarana fampisehoana. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
hitany (nitranga in-1) : «Ilay vadiko no nitazana avy eo am-baravarankely ka olona dimy lahy no hitany ka ny iray amin'izy ireo no misaron-tava. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
fifampidinihana (nitranga in-1) : Ho fanamafisana izay fanapahan-kevitra izay dia mitaky ny hanaovan'ny filohan'ny vaomieran'ny Vondrona Afrikanina sy ny vondrona Sadc tatitra momba ny firoson'ny fifampidinihana eo amin'ny fampiharana io andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy fepetra ny Filoha teo aloha io ny Cps farafahatarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Ambohibao (nitranga in-1) : FANAMBARAM-PANANANA > Omaly no nanatitra ny fanam- baràm-panana tetsy amin'ny Bianco, tetsy Ambohibao, ireo zandary mianatra ao amin' ny sekoly ambonin'ny zandarimaria ao Moramanga sy avy ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra. (Tapatapany)
Andraikitry (nitranga in-1) : Andraikitry ny rehetra ny fanabeazana ka mba atsipy ihany ny teny ho any am-pon'ireo mpanabe manam-panahy e. (Dia aza gaga ianao!)
nanantena (nitranga in-1) : «Hitako ho mbola nanantena mihitsy izy hoe mbola velona ilay vadiny. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Naiditra (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
maharaka (nitranga in-1) : « Mahery mihinan-kanina izy roa lahy sady tsy mifidy sakafo mihitsy saingy ny hohaniny indray no tsy maharaka. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
nosarahina (nitranga in-1) : « Ny vatana no tafasaraka fa ny fanahy tsy tafasaraka mihitsy », hoy i Njarame, renin'i Mahagaga sy Mahalatsa, na ireo zaza nikambana kibo nosarahina tamin'ny alalan'ny fandidiana. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
mPIHAZAKAZAKA (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
notapahana (nitranga in-1) : « Tsy noraisin'io mpivarotra io an-tsoratra ny anaran'ny olona nividy ilay laharana ka niteraka ny olana », hoy ny teo anivon'ity orinasa ity, izay nilaza fa ireo laharana tsy misy anarana kanefa amperinasa taorian'io dia notapahana avokoa. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
lokoina (nitranga in-1) : Izany hoe tsy mila lokoina ilay solitany amin'izay fotoana izay fa asiana karazana marika tsy hita maso», hoy hatrany Razafindratsara Jean Noël. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
noheveriko (nitranga in-2) : Tsy tao an-tsaiko teo hoe izy io voa io fa noheveriko fa olon-kafa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
CEMES (nitranga in-1) : CEMES SOANIERANA
fahaleovantenan' (nitranga in-1) : Etsy an-kilan'izay dia nanamafy ny tokony hanajan' ny rehetra ny fahaleovantenan'ny Cenit sy ny tetiandrom-pifidianana ihany koa ity Ffilankevi-pilaminana eo anivon'ny Vondrona Afrika-nina ity. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Ramanantsoa (nitranga in-2) : efa tao anatin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma hatramin'ny 12 taona, i Norolalao Ramanantsoa, izay kandidà vehivavy vonona ny hirotsaka hofidi- ana filohan'ny federasiona, amin'ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Hotel Panorama Andrainarivo. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Zandrikely (nitranga in-1) : Sainte Marie Ankazomanga Andraharo # Zandrikely Tsaramasay. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
kiriorioka (nitranga in-1) : «Tsy nisy zavatra lasan'izy ireo tao aminay satria nitsoka kiriorioka ireo olona eo amin'ny manodidina ka nitsoaka izy ireo», hoy kosa indray vehivavy iray tompon-trano tao amin'ity saika voatafika ity. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Andriamboavonjy (nitranga in-1) : Ireo karazan-damaody tena malagasy sy vita amin'ny akora malagasy kosa no asehon'ny Haihaingo, izay tarihin'i Hanitra Andriamboavonjy. (Faran’ny herinandro)
Ivanja (nitranga in-1) : a
bain (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Banaike (nitranga in-1) : Andrasan'ny mpankafy ny hira «Samy mandefitra», izay hiangaliany amin'ny gadona Sud Af mifangaro amin'ny gadona Banaike avy any amin'ny faritra Atsimo. (Faran’ny herinandro)
manampinampy (nitranga in-1) : Rehefa fotoana tsy fianarana vao manampinampy azy ireo izahay», hoy hatrany Tojonirina Heriniaina Alain. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nijoro (nitranga in-1) : Kelikely teo anefa vao nojereko ny endriny kanjo tena ilay dokotera mihitsy io maty io», hoy ihany ilay nijoro vavolombelona nahita maso ny zava-nitranga. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Antaninandro (nitranga in-3) : Faneva Antaninandro # Banjai Ambatomaro. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hanamarika (nitranga in-1) : Efa napetraka tamin'ny hoe toy ny asa rehetra ihany ny asan'ny mpilalao sarimihetsika, ka izay nahatonga an'i Raly hanamarika fa «avahana tsara ny fitiavana ao anatin'ny tantara sy ny tena fitiavana». (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
rakikira (nitranga in-6) : Tafiditra amin'ny fiaraha-miasa ny fitananana an'i Nathan amin'ny lokon'ny mozika hironany, ny fandrindrana, fandraisam-peo, famoahana rakikira sy ny fikarakarana fampisehoana. (Faran’ny herinandro)
ahafahany (nitranga in-1) : Io toerana maha renibe io dia ahafahany kokoa mandahatra ny fandaharam-potoanany amin'ny vady aman-janaka sy ireo zafikely an-daniny; amin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny fampisehoana an-kilany. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Lyonnais (nitranga in-1) : Promotion Tsaramasay # Olympic Lyonnais Ankorondrano Andranomahery. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
nahenoana (nitranga in-1) : “Tsy tonga izy ireo ary tsy nahenoana akony hatramin'ny nialanay teny Ivato”, hoy ny loharanom- baovao avy tamin'ireo delegasiona malagasy mpitsena teny amin'ny seranam-piaramanidina. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
Bianco (nitranga in-1) : FANAMBARAM-PANANANA > Omaly no nanatitra ny fanam- baràm-panana tetsy amin'ny Bianco, tetsy Ambohibao, ireo zandary mianatra ao amin' ny sekoly ambonin'ny zandarimaria ao Moramanga sy avy ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra. (Tapatapany)
mpifank' (nitranga in-2) : cCESCA – ANTANIMENA
Moizy (nitranga in-1) : Tsy azo atao ny mampiseho tahotra amin'ireo vahiny fa dia tsy maintsy manao izay handresena”, hoy
i Moizy Ramanandray na i Lobo, mpanazatra ny Terrible de la Côte Ouest. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
jazz (nitranga in-2) : Toy izany koa ny «Fanambalia», «Tsisy quoi»…
tômôbila (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Handimby (nitranga in-1) : Handimby sy hanohy izany koa ny sabotsy 16 febroary ny tarika Hazolahy, izay mivoy ny gadona mangaliba. (Faran’ny herinandro)
nampidirina (nitranga in-1) : Ho an'i Tongue Nat dia efa hatramin'ny taona 2009 no namolavolany ity rakikira ity ary hira 28 no noforonina, ka ny 14 no nampidirina ao anatin' ity vokatra ity. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Malok' (nitranga in-2) : Nanampy izany koa ny efa nisian'ny fotoana niarahan'ireo mpilalaon'ny « Malok'ila » rehetra sy ny vady aman-janany mba hialan'ny elanelana eo amin'izy ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Ireto (nitranga in-1) : Ireto farany izay mangataka ny amin'ny tokony hamerenana ny fandinihana ny fomba noentina nanen-dry ireo olona 44 ao anatin'ity rafitra ity. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
farafahatarany (nitranga in-1) : Ho fanamafisana izay fanapahan-kevitra izay dia mitaky ny hanaovan'ny filohan'ny vaomieran'ny Vondrona Afrikanina sy ny vondrona Sadc tatitra momba ny firoson'ny fifampidinihana eo amin'ny fampiharana io andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy fepetra ny Filoha teo aloha io ny Cps farafahatarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Maryl (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Norolalao (nitranga in-2) : efa tao anatin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma hatramin'ny 12 taona, i Norolalao Ramanantsoa, izay kandidà vehivavy vonona ny hirotsaka hofidi- ana filohan'ny federasiona, amin'ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Hotel Panorama Andrainarivo. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Honoré (nitranga in-1) : SAMY HAKA HO AZY > Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy afaka ny hifano- hana amin'ny fifidianana ireo kandidà ho Filoham- pirenena sy ireo kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fomba fijerin'ny mpahay lalàna, Honoré Rakotomanana. (Sombiny)
fahapotehan' (nitranga in-1) : “Entanina ny mponina mba tsy hanary zavatra manentsina ny fantson-drano satria avy amin'izany no mahatonga ny fahapotehan'ny fantsona sy ny lalana”, hoy hatrany ny fanentanan'Andriatsilavo Zo. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
afak' (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
nitantara (nitranga in-1) : «Zany ve tsy ho vita raha atao», hoy izy nitantara ny fahatsiarovany ireny tantara vahiny ireny. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
ATAAM (nitranga in-1) : ATAAM # FC Miray Itaosy. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
voizana (nitranga in-1) : Nitohana hatramin'ny fifamoi- voizana vokatry ny oram-baratra nahery vaika. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Marion (nitranga in-1) : Mpanakanto maromaro no miara-miasa amin'i Tongue tamin'ity rakikira ity ka anisan'ireny ry Anyah, Kougar, Raj, Marion ary GMMC. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Soavimbahoaka (nitranga in-2) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
ireto (nitranga in-3) : Ivon-toerana miisa dimy hafa no nanotrona ireto mpianatra ireto niaraka tamin'ny sekoly tsy miankina iray. (Fenoarivo – Sarona ireo olona telo mpamatsy rongony)
Ankorondrano (nitranga in-5) : a Ankorondrano andrefana # AS Tselatra Tsaramasay. (Faran’ny herinandro)
Kaomandà (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Tsiadana (nitranga in-3) : Action Manjakaray # AFC Tsiadana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
atleta (nitranga in-2) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
R. (Any andafy)
Made (nitranga in-1) : Tohina ihany ny hambom-po
Na dia nitana ny anjara toeran'ny mpampianatra sy nisalotra ny anarana hoe Made Yvette aza ny toerana voalohany noraisiny, nibahan-toerana sy nahazo laka kokoa teo amin'ny fiainan' i Raly ara-tsarimihetsika ny naha vadin-dRajao azy tao amin'ny «Malok'ila». (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Fidèle (nitranga in-1) : Naterinay tany amin'ny polisy izy», hoy Randrianantoanina Fidèle, tompon'andraikitry ny filaminana ao anatin'ny fokontanin'i Antohamadinika-atsimo tonga teny an-toerana. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Pacifique (nitranga in-1) : Pacifique Fort Duchesne # CC Club Anatihazo Isotry. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Rakotomavo (nitranga in-1) : Ny sekre-tera nasionalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, aloha omaly, no avy hatrany dia nandika ity fepetra noraisin'ny Cps ity ho «karazana filam-boatsiary mba hisian'ny fitoniana eto Madagasikara». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Rakotomahamina (nitranga in-1) : Fampandrian-tany > Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika manokana fampandrian-tany any amin' ny faritra Bongolava ny kolonely Rakotomahamina Florens, lehiben'ny fari-piadidian'ny zandarimaria aty Antananarivo, ny alarobia 13 desambra teo. (Tapatapany)
Bongolava (nitranga in-1) : Fampandrian-tany > Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika manokana fampandrian-tany any amin' ny faritra Bongolava ny kolonely Rakotomahamina Florens, lehiben'ny fari-piadidian'ny zandarimaria aty Antananarivo, ny alarobia 13 desambra teo. (Tapatapany)
teren' (nitranga in-1) : «Tsy mba teren'izy ireo hiasa izany izahay fa mianatra aloha. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Rotsaka (nitranga in-2) : JAO'S PUB – AMBOHIPO
Din Rotsaka sy Hazolahy haneho ireo kanto avy any amin'ny faritra Avaratra sy ny Atsimo Hifantoka betsaka amin'ireo mozika mafana ny fandaharam-potoanan'ny Jao's Pub eny Ambohipo, amin'ny faran'ity herinandro ity. (Faran’ny herinandro)
Tanteliniaina (nitranga in-1) : Nirava ny hariva aho no nifanena taminy nobataina, hoentina ho any amin'ny hopitaly», hoy indray Rafidison Tanteliniaina, zanakalahin'ny maty ihany koa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Peugeot (nitranga in-1) : hALATRA FIARA > Sarona ny olona nangalatra ilay fiara Peugeot 309, tetsy Analama- hitsy. (Tapatapany)
Bebe (nitranga in-1) : Bebe tanora. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Tsarahonenana (nitranga in-8) : CFP Nanisana # Tigre Tsarahonenana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Prosoja (nitranga in-1) : Lion Sport Andohalo # Prosoja Antsahameva. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Anosizato (nitranga in-1) : a
hoentina (nitranga in-1) : Nirava ny hariva aho no nifanena taminy nobataina, hoentina ho any amin'ny hopitaly», hoy indray Rafidison Tanteliniaina, zanakalahin'ny maty ihany koa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
pasitera (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Ouest (nitranga in-2) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
hahatafita (nitranga in-1) : Na izany aza, dia tsy nikely soroka izy nanao izay hahatafita ireo zanany. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Rootsy (nitranga in-2) : CEMES SOANIERANA
Atleta (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
nanolana (nitranga in-1) : Tsy tao amin'ny tranon'io miaramila io ihany anefa no notafihan'ireo jiolahy fa mbola nitety tranon'olona roa hafa izy tao aorian'izany sady nanolana. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
hanadiovana (nitranga in-1) : Mbola haharitra tapa-bolana eo ny asa hatao hanatsarana ny bozaka maniry sy hanadiovana ny lakan-drano manodidina, tsy hiangonan'ny rano. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Full (nitranga in-2) : Toy izany koa ny «Fanambalia», «Tsisy quoi»…
karakaray (nitranga in-3) : MATEMATIKA
Mahaliana olona maro ny fampirantiana momba ny taranja matematika sy ny informatika, karakarain' ny mpianatra eny amin' ny Oniversiten' Antananarivo, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
mahavoarohirohy (nitranga in-1) : Mbola natao fanadihadiana mombana halatra kojakojana fiara izy ankoatra ny halatra fiara mahavoarohirohy azy. (Tapatapany)
Rakotoarisoa (nitranga in-3) : Rakotoarisoa Joseph François, no anaran'io olona maty voatsindrona antsy teo amin'ny fony. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
niandrasana (nitranga in-2) : “Tsy maintsy niandrasana famatsiam-bola ny asa satria tsy vitan'ny Cua irery. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
kandidà (nitranga in-3) : SAMY HAKA HO AZY > Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy afaka ny hifano- hana amin'ny fifidianana ireo kandidà ho Filoham- pirenena sy ireo kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fomba fijerin'ny mpahay lalàna, Honoré Rakotomanana. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Ambohirimanjaka (nitranga in-1) : toerana iray eny Ambohirimanjaka no nisian'ilay loza
Ouadraha (nitranga in-1) : Haneho ireo karazana dihy nentin-drazana avy any amin'iny faritra Avaratry ny Nosy iny kosa ry Passi Florre, izay ahitana andriambavilanitra 22 ka anisan'ny asehon'izy ireo amin'izany ny Ouadraha. (Faran’ny herinandro)
zazalahikely (nitranga in-1) : Feno azy roa lahy ny tokotanin'ny hopitaly rehefa milalao ary miaina sy maherisetra toy ny zazalahikely rehetra ihany izy ireo. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Melky (nitranga in-1) : Hanotrona ny tarika Njila amin'ity fampisehoana ity ireo mpanakanto efatra notsongaina manokana, izay ahitana an'i D-Lain, Anyah, Lily ary Melky. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
melohy (nitranga in-1) : Fananam-bahoaka izany ary melohin'ny lalàna ny fandrombana azy», hoy ny minisitry ny Fitsarana, Christine Razanamahasoa. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
andraikitry (nitranga in-1) : «Hiompana amin'ny fanatanjahantena kokoa, araka izay efa niheverana ny fampiasana azy», hoy ity tompon' andraikitry ny CUA ity. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
nataon' (nitranga in-3) : Diabe niainga teny Androhibe ka hatreny amin' ny kianjan'Alarobia no nataon'ireo ankizy, tao anatin' ny fahavitrihana sy ny hafaliana. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Kougar (nitranga in-1) : Mpanakanto maromaro no miara-miasa amin'i Tongue tamin'ity rakikira ity ka anisan'ireny ry Anyah, Kougar, Raj, Marion ary GMMC. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
hanatsarana (nitranga in-1) : Mbola haharitra tapa-bolana eo ny asa hatao hanatsarana ny bozaka maniry sy hanadiovana ny lakan-drano manodidina, tsy hiangonan'ny rano. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Leader (nitranga in-1) : Tournoi Leader U13
Rosa (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
hanaonao (nitranga in-1) : Tsikaritra mantsy fa maro ireo manao fitafy tsy dia mendrika ny fanabeazana sy ahiana hitarika ny ankizy hanaonao foana rahatrizay lehibe. (Dia aza gaga ianao!)
hiangonan' (nitranga in-1) : Mbola haharitra tapa-bolana eo ny asa hatao hanatsarana ny bozaka maniry sy hanadiovana ny lakan-drano manodidina, tsy hiangonan'ny rano. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
anton' (nitranga in-4) : “Fampahafantarana ny olona ny fisian'ny ivon-toerana no anton'ny diabe. (Faran’ny herinandro)
Mifampitady (nitranga in-1) : « Mifampitady izy roa lahy rehefa tsy eo ny iray, toy ireny fanaony tamin'ny mbola kely ireny. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
ifandroritana (nitranga in-1) : Mbola ifandroritana eny amin'ny Fitsarana hatramin'izao ilay lalao « villa JJ » na loka trano mitentina Ar 90 tapitrisa eny Ivato, nanaovana lalao fisarihana ny 01 mey 2012. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
marobe (nitranga in-1) : «Hitan'izy ireo tamin'izay fa tsy izahay sy Rajao sy ny fitaovana irery akory no mamolavola ny tantara fa misy olona marobe manodidina anay», hoy hatrany izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Ambohimandroso (nitranga in-2) : Ilay zanany vavimatoa no efa mianatra asa ao Ambohimandroso. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Soavinandriana (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
hisitraka (nitranga in-2) : Araka ny tatitra nataon'ny minisitry ny Fitsarana hatrany dia antontan- taratasy fangatahana ny famo-tsoran-keloka miisa 20 eo ho eo no voarain'ilay Vaomiera manokana misahana ny famoahana didy ho an'ireo olona tokony hisitraka izany. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Imaintsoanala (nitranga in-1) : a
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
hanafana (nitranga in-2) : Hiaraka hanafana ny seho ry Rajao sy Raly, Françis Turbo ary Fou Hehy. (Faran’ny herinandro)
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ny Cps ao anatin'izay fanambarana izay rahateo fa «tokony tsy haneho fiandaniana amin' ny atsy na eroa mihitsy ireo rafi-panjakana ao anatin'ny tetezamita ao anatin'ny fotoam-pifidianana». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Nomarihina (nitranga in-1) : Nomarihina tamin'ny fanehoana ny fomba sy ny karazana fety ary sakafo sinoa izany andro omaly izany. (Tapatapany)
niantson' (nitranga in-1) : Io no niantson'i Fidy Rabearisoa ny hetsika izay hatolony ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia, anio alina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany, ao amin'ny Dôme Rta Ankorondrano. (Faran’ny herinandro)
fiara (nitranga in-5) : hALATRA FIARA > Sarona ny olona nangalatra ilay fiara Peugeot 309, tetsy Analama- hitsy. (Tapatapany)
Flore (nitranga in-1) : CEMES SOANIERANA
Rabemanantsoa (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
voakasik' (nitranga in-1) : Hatreto aloha dia ireo mpikambana sasantsany eo anivon'ny Parlemantan'ny tete- zamita no isan'ireo voakasik' izay raharaha fanodinkodinam-bolam-bahoaka izay. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
Nata (nitranga in-1) : FC Anay Ankatso # Nata Ampandrana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hampiharina (nitranga in-5) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
hiarahan' (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny, ireo hira rehetra nahafantarana ny tarika Njila hatramin'izay no hiarahan'izy ireo mikalo amin'io seho io. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
nandroba (nitranga in-1) : Jiolahy dimy no voalaza fa nandroba niaraka tamin'ny basy »kalachnikov » roa sy poleta roa tao amin'ity tokantrano iray, tetsy Soavimbahoaka ity. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Hôpitaly (nitranga in-1) : miaramila manana ny galona Kaomandà sady dokotera iray antsoina hoe Rabemanantsoa Rija Manalinarivo, 35 taona, miasa ao amin'ny sampana fandidiana loha ao amin'ny Hôpitaly Miaramila etsy Soavinandriana, monina etsy Soavimbahoaka no maty tao an-tranony afak'omaly alina. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
irosoana (nitranga in-1) : Ankoatra ny fandokoana ny solitany dia vahaolana iray hafa afaka irosoana hialàna amin'ny ahiahy amin'ny fampifangaroana solitany sy gazoala ihany koa ny fampiasana ny »agent traceur » amin'ny solitany. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
CEPA (nitranga in-1) : lalao fito no hifandimby etsy amin'ny kianjan'ny Coum 67 ha amin'ny alahady tontolo andro, amin'ilay Tournoi Donabe 192 fokon- tany, karakarain'ny CEPA. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
nialanay (nitranga in-1) : “Tsy tonga izy ireo ary tsy nahenoana akony hatramin'ny nialanay teny Ivato”, hoy ny loharanom- baovao avy tamin'ireo delegasiona malagasy mpitsena teny amin'ny seranam-piaramanidina. (Kitra Amboaran’ny CAF – Tsy mbola tonga ny Mbabane avy any Swaziland)
Isotry (nitranga in-5) : FC Jamaïque Isotry # ACT 67 ha avaratra. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nodimandry (nitranga in-1) : 49 taona izy io nodimandry tampoka io. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hipetrahan' (nitranga in-1) : Mbola afaka nandositra io dokotera io taorianfny naha voatifitra aza ka tsy niala lavitra ny trano dia nianjera ka maty», hoy ny ramatoa iray tompon'ny trano hipetrahan'ireo dokotera. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
fandrombana (nitranga in-1) : Fananam-bahoaka izany ary melohin'ny lalàna ny fandrombana azy», hoy ny minisitry ny Fitsarana, Christine Razanamahasoa. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
ekipan' (nitranga in-2) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
Nandrasana omaly nefa tsy mbola tonga ny ekipan'ny Mbabane Highlanders avy any Swaziland, hifanandrina amin'ny Terrible de la Côte Ouest avy any Boeny ao amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga amin'ny alahady ho avy izao. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
nahafatesany (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
Harrison (nitranga in-1) : Nofantenan'izy ireo amin'izany ireo hira miresaka ny fitiavana amin'ny lafiny rehetra ka niantsoana an-dry Anyah, Jimmy Harrison, Nathan sy Malalanirainy (The one) ary Safidy (123). (Faran’ny herinandro)
nahitana (nitranga in-2) : Ny teto an-toerana, izay nahitana an'i Hery sy Datita Rabeson, dia efa ela no nanomana fatratra ity seho ity, indrindra taorian'ny fandalovan'i Njila teto an-tanindrazana, ny faran'ny taona teo. (Fenoarivo – Sarona ireo olona telo mpamatsy rongony)
Sina (nitranga in-1) : Nanatrika ny hetsika teny an-toerana ny Masoivohon'i Sina eto Madagasikara. (Tapatapany)
voazaran' (nitranga in-1) : RAOZY AN-JATONY
hisian' (nitranga in-3) : Ny sekre-tera nasionalin'ny antoko Tgv, Lanto Rakotomavo, aloha omaly, no avy hatrany dia nandika ity fepetra noraisin'ny Cps ity ho «karazana filam-boatsiary mba hisian'ny fitoniana eto Madagasikara». (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
nampiray (nitranga in-1) : Na dia efa feno 4 taona aza izy roa lahy ankehitriny dia mbola tavela ao anatin'izy hatrany ilay toetra nampiray azy ireo hatrany am-bohoka. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Ampandrianomby (nitranga in-1) : “Tsy maintsy arahi-maso akaiky ny fivoaran' io andian-drahona io satria ahiana hivadika rivo-doza”, hoy i Newsman Priscoffe, avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
nahatonga (nitranga in-3) : Nambaran'Andriamamonjy Evariste Henri, avy amin'ny minisiteran'ny Asa vaventy kosa fa ny tsy fahampian'ny vola no nahatonga ny asa niandry. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Panorama (nitranga in-1) : efa tao anatin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma hatramin'ny 12 taona, i Norolalao Ramanantsoa, izay kandidà vehivavy vonona ny hirotsaka hofidi- ana filohan'ny federasiona, amin'ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Hotel Panorama Andrainarivo. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Ankatso (nitranga in-4) : Niara-niombom-pifaliana tamin'izany koa ireo mpianatra etsy amin' ny ivon-toeram-pianarana teny sinoa (Institut Confucius) etsy amin' ny oniversite Ankatso. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
naiditra (nitranga in-1) : Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika mihitsy ireo olona roa ireo ny tapaky ny volana mey hatramin'ny jona 2012 noho io lalao io izay marihina fa nandraisana mpilalao an'hetsiny anjara tamin'izany. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
nanompa (nitranga in-1) : Rakotoarisoa Joseph fony mbola velona…
Nanao teny mamoafady «Efa ny maraina, nialoha ny nandehanako nianatra, no henoko nanompa ny raiko teo an-tokontany teo izy. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Razafimahenina (nitranga in-1) : Matahotra ny fokonolona vokatr'izany na dia ny hisi-kotra ilay ramatoa tao ambany trano ao aza », hoy Razafimahenina Julie, komity ao amin'ny fokontany Beloha. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
nohazomina (nitranga in-1) : Tamin'io andro io ihany dia efa nohazomina sy natao fanadihadiana tetsy amin'ny biraon'ny polisin'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra etsy Isotry ity voarohirohy ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Frero (nitranga in-1) : Frero Ambohipo # Acem Fort Duchesne. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hampisalorana (nitranga in-1) : Taloha, raha vao nanomboka nahazo vahana teto amin- tsika ny «talata matavy», izay matetika ireo sekoly tsy miankina manompana ny fandaharam-pianarana vahiny no mankalaza izany, dia ireo endrik'olona maherifo amin' ny sary miaina sy ny angano na karazam-biby no hampisalorana ny ankizy. (Dia aza gaga ianao!)
Antsahameva (nitranga in-3) : Lion Sport Andohalo # Prosoja Antsahameva. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
ANDAVANANDRONY (nitranga in-1) : RAHOLIARIHANTA VOLOLONIRINA SAHONDRA NA I RALY NO MANAZAVA NY TENA TOETRA SY NY FOMBA FIAINANY AMIN'NY FILALAOVANA TANTARA SY NY FIAINANA ANDAVANANDRONY. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nosambory (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
lava (nitranga in-1) : «Voaroba tato ny ankamaroan'ireo zava-maneno fampianaranay», hoy i Volahasiniaina, mpanakanto fantadaza amin' ny fitendrena valiha sy aponga lava no sady mpampianatra eo anivon'ity ivon-toerana ity. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
Ambohimanarina (nitranga in-2) : Dakar Ambohimanarina # Galaxy Andraharo. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
ankanjo (nitranga in-1) : «Teny amin'ny friperia no nividianana ny ankamaroan' ireo ankanjo nampiasaina tamin'ireo horonantsary ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
maso (nitranga in-1) : Kelikely teo anefa vao nojereko ny endriny kanjo tena ilay dokotera mihitsy io maty io», hoy ihany ilay nijoro vavolombelona nahita maso ny zava-nitranga. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Tournoy (nitranga in-2) : lalao fito no hifandimby etsy amin'ny kianjan'ny Coum 67 ha amin'ny alahady tontolo andro, amin'ilay Tournoi Donabe 192 fokon- tany, karakarain'ny CEPA. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
hana (nitranga in-1) : SAMY HAKA HO AZY > Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy afaka ny hifano- hana amin'ny fifidianana ireo kandidà ho Filoham- pirenena sy ireo kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fomba fijerin'ny mpahay lalàna, Honoré Rakotomanana. (Sombiny)
ANDAVANANDRON' (nitranga in-1) : zARY RAIKI-TAMPISAKA AO AN-TSAIN'NY MPANKAFY NY TANTARA «MALOK'ILA» NY FANAMBADIAN-DRAJAO SY RALY, HANY KA MISY MITADY HANAFANGARO IZANY HATRANY AMIN'NY FIAINANA ANDAVANANDRON'IREO MPILALAO SARIMIHETSIKA IREO. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hosoloina (nitranga in-1) : Fahavoazana lehibe tokoa no hita eo Anosy satria fantsona manodidina ny 90, amin'ny iray metatra avy, no tsy maintsy hosoloina. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
hafatry (nitranga in-1) : «Vita hatreo ny lalao fa hiditra amin'ny tena asa isika», hoy ny hafatry ny Tale Jeneralin'ny mi'Ritsoka, Hery Andriamampianina raha nandray an'i Nathan. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
natao (nitranga in-3) : Marina tokoa fa fety no natao saingy misy ny fihetsika tsy tandrina sy tokony hahatonga saina satria raha fianarana sy fanabeazana no tiana hasongadina, dia ny mifanohitra amin'izany indraindray no zavatra iainana na ampiainana ny ankizy. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
fampirantiana (nitranga in-3) : MATEMATIKA
Catalon (nitranga in-2) : Catalon Anjanahary # FC Anay Ankatso. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Julie (nitranga in-1) : Matahotra ny fokonolona vokatr'izany na dia ny hisi-kotra ilay ramatoa tao ambany trano ao aza », hoy Razafimahenina Julie, komity ao amin'ny fokontany Beloha. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
niheverana (nitranga in-1) : «Hiompana amin'ny fanatanjahantena kokoa, araka izay efa niheverana ny fampiasana azy», hoy ity tompon' andraikitry ny CUA ity. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
nampiharina (nitranga in-2) : tsy milefitra amin'ny heviny ny CPS raha tsy tafody Ravalomanana
Malalanirainy (nitranga in-1) : Nofantenan'izy ireo amin'izany ireo hira miresaka ny fitiavana amin'ny lafiny rehetra ka niantsoana an-dry Anyah, Jimmy Harrison, Nathan sy Malalanirainy (The one) ary Safidy (123). (Faran’ny herinandro)
nobataina (nitranga in-1) : Nirava ny hariva aho no nifanena taminy nobataina, hoentina ho any amin'ny hopitaly», hoy indray Rafidison Tanteliniaina, zanakalahin'ny maty ihany koa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hitondra (nitranga in-1) : Voalaza fa hitondra oram-be isaky ny hariva hatramin'ny faran'ny herinandro ity andro ratsy ity. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
nanodinkodina (nitranga in-1) : «Raha ny lalàna manan-kery no jerena sy hampiharina dia tokony tsy hahazo famotsoran-keloka mihitsy ireo olona nanodinkodina volam-bahoaka. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
Vololonirina (nitranga in-1) : Na dia mbola ao anatin'ny hatanorana aza dia efa loa-jafy Raholiarihanta Vololonirina Sahondra, very anarana amin'ny hoe Raly, toerana tazoniny ao anatin'ilay tantara «Malok'ila». (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
azoko (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
traceur (nitranga in-1) : Ankoatra ny fandokoana ny solitany dia vahaolana iray hafa afaka irosoana hialàna amin'ny ahiahy amin'ny fampifangaroana solitany sy gazoala ihany koa ny fampiasana ny »agent traceur » amin'ny solitany. (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
sasantsany (nitranga in-1) : Hatreto aloha dia ireo mpikambana sasantsany eo anivon'ny Parlemantan'ny tete- zamita no isan'ireo voakasik' izay raharaha fanodinkodinam-bolam-bahoaka izay. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
sanganasa (nitranga in-1) : Tanjon'ny roa tonta amin'ny fiaraha-miasa ny hametrahana sanganasa maharitra fa tsy hiredareda am-boalohany fotsiny. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
nakotroka (nitranga in-1) : nakotroka ny fankalazana ny andron'ny sekoly tamin' ity herinandro ity. (Dia aza gaga ianao!)
Florens (nitranga in-1) : Fampandrian-tany > Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika manokana fampandrian-tany any amin' ny faritra Bongolava ny kolonely Rakotomahamina Florens, lehiben'ny fari-piadidian'ny zandarimaria aty Antananarivo, ny alarobia 13 desambra teo. (Tapatapany)
Tahala (nitranga in-1) : MATEMATIKA
nahavanona (nitranga in-1) : Tsy niala tamin'ilay lehilahy tompon-trano ny ahiahy ho nahavanona izao vono olona nitranga ny alarobia hariva lasa teo, izao. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hampivadika (nitranga in-1) : Ao anatin'ny telo na efatra andro no mety hampivadika io andian-drahona io ho rivo-doza, raha ny tombantombana ihany. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Andraharo (nitranga in-2) : Sainte Marie Ankazomanga Andraharo # Zandrikely Tsaramasay. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Amboasary (nitranga in-1) : Tsy tafody
Tsy tafody tany Amboasary Atsimo intsony i Mahagaga sy Mahalatsa, taorian'ny fandidiana azy ireo. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Kianjavato (nitranga in-1) : KAFE GASY
Miavaka amin'ny famoriany ireo karazana kafe misy eto Madagasikara ny foibem-pikarohan' ny ivon-toeram-pirenena misahana ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra (Fofifa) ao Kianjavato. (Tsitokotoko)
Oscar (nitranga in-2) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
avrily (nitranga in-1) : Ho fanamafisana izay fanapahan-kevitra izay dia mitaky ny hanaovan'ny filohan'ny vaomieran'ny Vondrona Afrikanina sy ny vondrona Sadc tatitra momba ny firoson'ny fifampidinihana eo amin'ny fampiharana io andininy mamaritra ny fampodiana tsy misy fepetra ny Filoha teo aloha io ny Cps farafahatarany amin'ny fiandohan'ny volana avrily izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
Toamasina (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
tratrary (nitranga in-1) : «Navoaka maimaika fotsiny ka tsy feno ny fepetra rehetra arahina momba ny toetra amam-panahy tokony hananan' ireo mpikambana handrafitra ny Ffm sy ny tanjona tratrarin'ny Ffm ary ny fomba noentina nana- ovana izany», araka ny voafaritra ao anatin'ny fanambarana navoa-kan'izy ireo, omaly. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
hanomezana (nitranga in-1) : ny fandaharan-dalao ho an'ny sabotsy, eo amin' ny sokajy Diviziona faharoa, no homena antsika anio fa rahampitso kosa no hanomezana ny fandaharam-potoana ho an'ny alahady. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hahafahana (nitranga in-2) : Natao izany mba hahafahana mandinika eo anivon'ny vaomieran'ny famatsiam- bola goavana amin'ny harena an-kibon'ny tany (Cgim) ny fahamarinan' ireo faktiora ireo sy ny tamberim-bidy tokony haloan'Ambatovy manoloana ireo vokatra efa naondrany. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
Jaobarison (nitranga in-1) : Ny Fitsarana no hanapaka izay ho tompony », hoy i Jaobarison Randrianarivony mpiara-nanatontosa ny lalao. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
nandriaka (nitranga in-1) : nivarahontsana ny iray tanàna raha nahita ny ra nandriaka tao amin'ny trano onenan'ny lehilahy iray, rahalahy am-panambadian'ity raim-pianakaviana namoy ny ainy tetsy Antohamadinika-Atsimo. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
vokary (nitranga in-1) : Hiara-dalana eto ny mozika sy ireo fitafiana vokarin'i Ben, izay fantatra amin'ny tontolon'ny lamaody. (Faran’ny herinandro)
haloan' (nitranga in-1) : Natao izany mba hahafahana mandinika eo anivon'ny vaomieran'ny famatsiam- bola goavana amin'ny harena an-kibon'ny tany (Cgim) ny fahamarinan' ireo faktiora ireo sy ny tamberim-bidy tokony haloan'Ambatovy manoloana ireo vokatra efa naondrany. (Tsitokotoko)
Terrible (nitranga in-2) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
voarohirohy (nitranga in-1) : Tamin'io andro io ihany dia efa nohazomina sy natao fanadihadiana tetsy amin'ny biraon'ny polisin'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra etsy Isotry ity voarohirohy ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Tale (nitranga in-1) : «Vita hatreo ny lalao fa hiditra amin'ny tena asa isika», hoy ny hafatry ny Tale Jeneralin'ny mi'Ritsoka, Hery Andriamampianina raha nandray an'i Nathan. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
Hitondra (nitranga in-3) : Hitondra filaminana anefa ve izany sa hiteraka koron-tana. (Faran’ny herinandro)
atolotry (nitranga in-1) : CEMES SOANIERANA
nijery (nitranga in-1) : Nivoaka teo an-tokotany aho nijery dia hitako fa misy olona iray mitakoko eo amin'ny arabe. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
Amboma (nitranga in-1) : Sandratra (Vehivavy) Amboma # AS Jemico Sabotsy Namehana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Filankevity (nitranga in-1) : tsy afa-po fa mitaky ny amin'ny tokony mbola tsy hamoahan'ny governemanta ny didim-panjakana fampiharana ny firafitry ny Filankevity ny fampihavanana malagasy (Ffm) ireo mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin' ny «Voifiraisana». (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Tsamy (nitranga in-2) : Tsami Tsarahonenana # Banjai Ambatomaro. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Niofana (nitranga in-1) : Niofana ho mpitsabo mpanampy izy. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Andrainarivo (nitranga in-1) : efa tao anatin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma hatramin'ny 12 taona, i Norolalao Ramanantsoa, izay kandidà vehivavy vonona ny hirotsaka hofidi- ana filohan'ny federasiona, amin'ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Hotel Panorama Andrainarivo. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Victorienne (nitranga in-1) : Ankon'ny ranomaso ary safotra mihitsy anefa izy vao notenenin'ireo mpitsabo teo amin'ny sampana vonjy taitran'ny Hjra hoe fa efa ao amin'ny tranom-paty ny razana», hoy i Hetsiavitra Victorienne, lehiben'ny vakim-paritra fahatelo ao anatin'ity fokontany, izay nitondra ny vadin'i Joseph tany amin'ny hopitaly. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Ambohitrakely (nitranga in-1) : AS Junior Betongolo # PSG Ambohitrakely. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nokarakaray (nitranga in-1) : Tonga ny fotoana ka raikitra amin'izay ny fiaraha-miasan'i Nathan, ilay nandrombaka ny fandresena tamin'ny fifaninanana The One – ilay feo tsara indrindra- nokarakarain'ny Rta, sy ny mi'Ritsoka Production. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
mirefy (nitranga in-1) : Fototra kafe 3 700, izay ahitana karazany miisa 170 no voleny amina tany mirefy 30 Ha ao amin'io toerana io. (Tsitokotoko)
kalitaon' (nitranga in-1) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
Marc (nitranga in-1) : tsy milefitra amin'ny heviny ny CPS raha tsy tafody Ravalomanana
fikojana (nitranga in-1) : Hifarimbona amin'ny fanamboarana azy io ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) sy ny minisiteran'ny Asa vaventy, amin'ny alalan'ny tahiry ho fikojana ny lalana (FER). (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
olympika (nitranga in-1) : Voatifitra mafy teo amin' ny lohany sy ny sandriny io sakaizan'ity atleta olympika afrikanina tatsimo ity ka nitarika ny fahafatesany. (Any andafy)
anisan' (nitranga in-5) : Mankafy ny mijery horonantsary amin'ny fahitalavitra i Raly hatramin'izay ary anisan'ny tena ankafiziny ireo tantara miresa-pitiavana sy ireo tantara mitohy toy ny «Cathalina». (Faran’ny herinandro)
niantsoana (nitranga in-1) : Nofantenan'izy ireo amin'izany ireo hira miresaka ny fitiavana amin'ny lafiny rehetra ka niantsoana an-dry Anyah, Jimmy Harrison, Nathan sy Malalanirainy (The one) ary Safidy (123). (Faran’ny herinandro)
vavimatoa (nitranga in-1) : Ilay zanany vavimatoa no efa mianatra asa ao Ambohimandroso. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Jao' (nitranga in-1) : JAO'S PUB – AMBOHIPO
hamoahan' (nitranga in-1) : tsy afa-po fa mitaky ny amin'ny tokony mbola tsy hamoahan'ny governemanta ny didim-panjakana fampiharana ny firafitry ny Filankevity ny fampihavanana malagasy (Ffm) ireo mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin' ny «Voifiraisana». (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
lalàna (nitranga in-4) : «Raha ny lalàna manan-kery no jerena sy hampiharina dia tokony tsy hahazo famotsoran-keloka mihitsy ireo olona nanodinkodina volam-bahoaka. (Sombiny)
Melaky (nitranga in-1) : Voakasika avokoa ny faritra Boeny, Melaky, Menabe ary miitatra hatraty afovoan-tany. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Baracap (nitranga in-1) : Baracap Ambatomaro # AS B 52 Ankadindramamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
UEST (nitranga in-1) : Tournoi Leader U13
henoko (nitranga in-2) : Ny feo henoko voalohany dia olona miteny ratsy sady mitabataba hoe:haingana fa efa ela no niandrasana anareo», hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray mpiray vodirindrina amin'ireto olona voatafika. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Ranomasimbe (nitranga in-1) : miala any indray ny andian-drahona mitoetra ao amin'ny Lakandranon'i Mozambika nanomboka omaly, ankoatra ilay efa nihaodihaody tany amin'ny Ranomasimbe Indianina. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
rakitsary (nitranga in-1) : Nampaha- fantariny omaly tetsy amin'ny CGM Analakely ny rakikira sy rakitsary niarahany namokatra tamin'ny mpanakanto roa dia ny «HAT» an'i Tongue Nat sy ny «Tantsaha» an-dRajery. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
nametrahana (nitranga in-1) : « Tsy dia misy fanaraha-maso matetika tsy maintsy arahina saingy amin'ny maha mbola marefo azy ireo no nametrahana azy eto akaiky eto. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Ankadindramamy (nitranga in-1) : Baracap Ambatomaro # AS B 52 Ankadindramamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nanontaniana (nitranga in-2) : Nanilika andraikitra
Nanilika ny andraikitra any amin'ilay toeram-pivarotana nivarotra io laharan-tariby io ilay orinasam-pifandraisana rehefa nanontaniana. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hanaovana (nitranga in-1) : Antony hanaovana izao ny hetsika manokana hiadiana amin'ny kolikoly izay tante-rahina eo anivon'ny zanda-rimaria. (Tapatapany)
mpilalao (nitranga in-6) : Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika mihitsy ireo olona roa ireo ny tapaky ny volana mey hatramin'ny jona 2012 noho io lalao io izay marihina fa nandraisana mpilalao an'hetsiny anjara tamin'izany. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
noharina (nitranga in-1) : Kivy be aho tamin'izay satria tena tsy nanan-kambara raha noharina tamin'ilay mpilalao niaraka tamiko, ka efa nihevitra ny tsy ho voaantso intsony. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
minisiteran' (nitranga in-3) : Hifarimbona amin'ny fanamboarana azy io ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) sy ny minisiteran'ny Asa vaventy, amin'ny alalan'ny tahiry ho fikojana ny lalana (FER). (Tsitokotoko)
Phraternel (nitranga in-1) : Phraternel, Ankorondrano andrefana # FC J. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Turbo (nitranga in-3) : cCESCA – ANTANIMENA
hiangaly (nitranga in-1) : Ny mifanohitra amin'izay kosa no entin'ny Ts'Art Dihy izay hiangaly kosa ireo dihy maoderina sy dihy mihaja. (Faran’ny herinandro)
Tigre (nitranga in-3) : CFP Nanisana # Tigre Tsarahonenana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
Scoop (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2005 no teraka ny tantarany sy ny sarimihetsika satria anisan'ireo mpilalao 10 notsongain'ny Scoop Digital tamin'ireo olona 200 mahery nisoratra anarana hifaninana hilalao tamin'ilay tantara mitohy «Jiaby jiaby» izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Paralympika (nitranga in-1) : mPIHAZAKAZAKA TAPA-TONGOTRA
hahatonga (nitranga in-1) : Marina tokoa fa fety no natao saingy misy ny fihetsika tsy tandrina sy tokony hahatonga saina satria raha fianarana sy fanabeazana no tiana hasongadina, dia ny mifanohitra amin'izany indraindray no zavatra iainana na ampiainana ny ankizy. (Dia aza gaga ianao!)
tiako (nitranga in-1) : «Anisan'ny tena tiako teo aloha ny mijery fampisehoana fa lasa tsy misy ambiansy intsony satria lasa ianao ihany koa no jeren'ny olona ao anatin'ny fampisehoana», hoy hatrany izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Promotion (nitranga in-1) : Promotion Tsaramasay # Olympic Lyonnais Ankorondrano Andranomahery. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
VOLOLONIRINA (nitranga in-1) : RAHOLIARIHANTA VOLOLONIRINA SAHONDRA NA I RALY NO MANAZAVA NY TENA TOETRA SY NY FOMBA FIAINANY AMIN'NY FILALAOVANA TANTARA SY NY FIAINANA ANDAVANANDRONY. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Nofantenan' (nitranga in-1) : Nofantenan'izy ireo amin'izany ireo hira miresaka ny fitiavana amin'ny lafiny rehetra ka niantsoana an-dry Anyah, Jimmy Harrison, Nathan sy Malalanirainy (The one) ary Safidy (123). (Faran’ny herinandro)
Sport (nitranga in-3) : Tournoi Leader U13
Lalao famaranana hibatana ondry: FC 2L # 3 ME Vétéran: UEST 67 ha # Lion Sport. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hitaoman' (nitranga in-1) : Haharitra hatramin'ny sabotsy io fampirantiana io, izay hitaoman'ireto mpianatra ireo ny rehetra mba hanome lanja izany taranja izany. (Tapatapany)
Itaosy (nitranga in-1) : ATAAM # FC Miray Itaosy. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
hatreo (nitranga in-2) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
Lion (nitranga in-3) : Tournoi Leader U13
Yvette (nitranga in-1) : Tohina ihany ny hambom-po
nilaza (nitranga in-4) : Olona roa no nilaza fa tompon'ilay laharan-tariby iray voasarika, ka nahatonga ilay trano tsy mbola natolotra na iza na iza hatramin'izao. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
ekipa (nitranga in-3) : fihaonan'ny ekipa roa nandray anjara tamin'ny alahady teo
Behoririka (nitranga in-1) : PIMENT CAFÉ – BEHORIRIKA
Rakotozafy (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
nanotrona (nitranga in-1) : Ivon-toerana miisa dimy hafa no nanotrona ireto mpianatra ireto niaraka tamin'ny sekoly tsy miankina iray. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Faralalao (nitranga in-1) : Manana zo mianatra sy beazina toy ny rehetra izy”, hoy Randrianarivony Faralalao, talen'ny Orchidées Blanches. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Cristel (nitranga in-1) : Hitondra endrika vaovao ao anatin'ny fikarohana nataon-dry Henry, Cristel, Rajemisa, Mamisoa, Fenosoa ary Pepe ity fampisehoana ity, izay haneho ny «hira gass jazz». (Faran’ny herinandro)
niakarapoka (nitranga in-1) : «I Dada efa niakarapoka avy aty an-damosina teo antokonam-baravarany no tazako rehefa nivoaka ny trano aho noho ny antsoantson'ireo teo amin'ny manodidina hoe maty i dadatoa Joseph. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
nahatratrarana (nitranga in-1) : Voan'ny lozam-pifamoivoizana tetsy Amba-tomaro ilay fiara ny faran'ny herinandro teo, ka izay no nahatratrarana azy. (Tapatapany)
maillot (nitranga in-1) : Soratra: Faly Randriamiarantsoa – Sary: Njato Mahefa/Sergio Maryl Vakansan-dRajao mianakavy Lafo daholo ary ny Kisoa Lasa amin'izay isika Ramatoa Vita hatreo ny fivakian-doha Vita matavy ny rendez-vous Tsy taitra kalamina eo Rajao a ! Fa ny maillot de bain efa azoko ao Fetra sy Feno no miandry trano Fa isika roa ho eny amoron-drano Réf : Zany zahay raha hi-voyage Vakansan-dRajao mianakavy Ry pasitera avelao ho any Raha misy klé dia mandeha any De lasa tokoa ‘ty le tômôbila Mody voangory .... (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
votoanty (nitranga in-1) : Tsy misy azo lazaina mihoatra izay anefa aloha ny votoantin'ny famotorana», hoy ny kaomisera Rakotobe Hery Vola Andry, lefitry ny lehiben'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra, etsy Isotry. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
resahan' (nitranga in-1) : Ny Malagasy, izay efa sahirana vao mahita Ar 400 handoavana taksibe, kanefa ireo olon'ny tetezamita resahan'ny UA ireo aza mahavita mive-zivezy any ivelany any hatrany. (Sazin’iza)
Evariste (nitranga in-1) : Nambaran'Andriamamonjy Evariste Henri, avy amin'ny minisiteran'ny Asa vaventy kosa fa ny tsy fahampian'ny vola no nahatonga ny asa niandry. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
nampalaza (nitranga in-1) : Hitondra ny gadona avy any avaratra i Din Rotsaka, amin'ny alalan'ireo hira nampalaza azy toy ny «Papango be», «Anto dance», «Amboara raha»… sy ireo vokatra vaovao. (Faran’ny herinandro)
Hotel (nitranga in-1) : efa tao anatin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma hatramin'ny 12 taona, i Norolalao Ramanantsoa, izay kandidà vehivavy vonona ny hirotsaka hofidi- ana filohan'ny federasiona, amin'ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Hotel Panorama Andrainarivo. (Fifidianana – Mikendry hanarina ny atletisma ry Norolalao Ramanantsoa)
Alain (nitranga in-3) : Efa tsy nahatsiaro tena intsony izy tamin'izay», hoy Tojonirina Heriniaina Alain, zanaka lahimatoan-dRakotoarisoa Joseph François. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Hahatafita (nitranga in-1) : Hahatafita zanaka
Rajao (nitranga in-4) : «Hitan'izy ireo tamin'izay fa tsy izahay sy Rajao sy ny fitaovana irery akory no mamolavola ny tantara fa misy olona marobe manodidina anay», hoy hatrany izy. (Faran’ny herinandro)
biraon' (nitranga in-1) : Tamin'io andro io ihany dia efa nohazomina sy natao fanadihadiana tetsy amin'ny biraon'ny polisin'ny kaomisarian'ny Boriborintany fahefatra etsy Isotry ity voarohirohy ity. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
notadiavina (nitranga in-1) : Hay moa ka ilay toetran' olona manana fandeferana no notadiavina tamin'ilay tantara», hoy izy nampahatsiaro ny dingana voalohany nidirany teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hijerena (nitranga in-1) : Eo koa no haingana hijerena azy ireo raha sendra marary », hoy Dr Raherison Romain Aristide, ao amin'ny Hjra. (Zaza niraiki-kibo – Mbola tavela an-tsain’i Mahagaga sy Mahalatsa ny fitakosonana)
Rabemananjara (nitranga in-1) : efa vonona handray ny Mbabane ny TCO Boeny
Rabenala (nitranga in-1) : Saika ireo atleta nanana ny lazany fahiny, izay niaina tsara tao anatin' ny taranja, no mandrafitra ny ekipan'io filoha vonji- maikan'ny federasiona io, toa an-dry Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala sy Hubert Rakotombelontsoa
soradihy (nitranga in-1) : Santionany amin'ireny ny «Si j'avais un marteau», «A présent tu peux ton aller», «Reviens vite et oublie»… Mpahay zava-maneno 16 mirahalahy kosa no hanaraka azy ireo amin'ny mozika ary handravaka izany ny dihy sy soradihy ary tantara an-tsehatra miaraka amin'ireo mpandihy 8 mianadahy avy amin'ny Dj'Ampela, D1…. (Faran’ny herinandro)
nihazakazaka (nitranga in-1) : Safotra
misolo (nitranga in-1) : Mba hisian'ny fanaraha-maso akaiky ny fifidianana dia nitaky ny fanamafisana ny biraom-pifandraisana irai-sam-pirenena misolo tena ny vondrona Sadc eto Madagasikara ny Cps. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
notrony (nitranga in-1) : Nahatratra 300 mahery izy ireo notronin'ny ray aman-dreny sy ny mpiray tampo amin'ireo zaza manana fahasembanana. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
Dada (nitranga in-3) : «I Dada efa niakarapoka avy aty an-damosina teo antokonam-baravarany no tazako rehefa nivoaka ny trano aho noho ny antsoantson'ireo teo amin'ny manodidina hoe maty i dadatoa Joseph. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
halehany (nitranga in-1) : Sanatriavina tsy manozona fa tenim-pahendrena ny hoe: «zaro amin'ny lalana tokony halehany ny zaza, dieny mbola kely fa rehefa lehibe izy dia tsy ho afaka aminy intsony izany. (Dia aza gaga ianao!)
firafitry (nitranga in-1) : tsy afa-po fa mitaky ny amin'ny tokony mbola tsy hamoahan'ny governemanta ny didim-panjakana fampiharana ny firafitry ny Filankevity ny fampihavanana malagasy (Ffm) ireo mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin' ny «Voifiraisana». (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
nanakatona (nitranga in-1) : Noho izay vina izay, sy hahafahana mikojakoja ny kianja filalaovam-baolina eny Alarobia dia nanapa-kevitra ny kaominina eto Antananarivo renivohitra nanakatona azy tapa-bolana. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
hananan' (nitranga in-1) : «Navoaka maimaika fotsiny ka tsy feno ny fepetra rehetra arahina momba ny toetra amam-panahy tokony hananan' ireo mpikambana handrafitra ny Ffm sy ny tanjona tratrarin'ny Ffm ary ny fomba noentina nana- ovana izany», araka ny voafaritra ao anatin'ny fanambarana navoa-kan'izy ireo, omaly. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Jean (nitranga in-2) : «Amin'ny faran' ny volana marsa any ho any no mety hampiharina izy io», hoy Razafindratsara Jean Noël, lehiben'ny sampan-draharaha misahana ny kalitaon' ireo vokatra ara-tsolika eo anivon'ny Ofisy malagasin'ny solika (Omh). (Kalitaon’ny gazoala – Mety hihatra amin’ny avrily ny fanamarihana ny solitany)
Florre (nitranga in-1) : Haneho ireo karazana dihy nentin-drazana avy any amin'iny faritra Avaratry ny Nosy iny kosa ry Passi Florre, izay ahitana andriambavilanitra 22 ka anisan'ny asehon'izy ireo amin'izany ny Ouadraha. (Faran’ny herinandro)
hoenty (nitranga in-1) : Ankoatra ireo hira taloha nahafantarana ny tarika toy ny «tao an-tsekoly», «Adama sy Eva», «Rock Sos», «Raosy jamba»… sy ireo hira nanamarika ny faha-25 taona toy ny «Lolo», «Tody», «Miha mafana ny tany»… dia hoentin'ny tarika ao anatin'ity seho ity ihany koa ireo hiaka farany tamin'ilay rakikira «maninona moa», izay nivoaka tamin'ny taon-dasa. (Faran’ny herinandro)
ambiansy (nitranga in-1) : «Anisan'ny tena tiako teo aloha ny mijery fampisehoana fa lasa tsy misy ambiansy intsony satria lasa ianao ihany koa no jeren'ny olona ao anatin'ny fampisehoana», hoy hatrany izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Ambohitrimanjaka (nitranga in-1) : toerana iray eny Ambohirimanjaka no nisian'ilay loza
haikanto (nitranga in-1) : nisy namaky ny ivon-toeram-panabeazana momba ny haikanto etsy Ambanidia. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
notsongay (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2005 no teraka ny tantarany sy ny sarimihetsika satria anisan'ireo mpilalao 10 notsongain'ny Scoop Digital tamin'ireo olona 200 mahery nisoratra anarana hifaninana hilalao tamin'ilay tantara mitohy «Jiaby jiaby» izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
hahatsikaritra (nitranga in-1) : Mety tsy hahatsikaritra ny olon-dehibe sy ny mpanabe, fa ireo olona avy ety ivelany no manao tsindro-paingotra. (Dia aza gaga ianao!)
namaky (nitranga in-3) : nisy namaky ny ivon-toeram-panabeazana momba ny haikanto etsy Ambanidia. (Fanafihan-jiolahy – Kaomandà sady mpitsabo maty voatifitra teo amin’ny fony)
hiakaran' (nitranga in-1) : “Mety ahiana ny hiakaran'ny rano vokatr'izany amin'ireo faritra ireo”, hoy ihany i Newsman Priscoffe. (Toetr’andro – Misy andian-drahona ahiana hivadika rivo-doza)
Nanamarika (nitranga in-1) : tAOM-BAOVAO
Nanamarika ny taom-baovao sinoa ny firenena sinoa omaly. (Tapatapany)
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
kendren' (nitranga in-1) : Olona manodidina ny 50 000 ka hatramin'ny 65 000 no kendren'izy ireo hahazo rano fisotro madio, amin'ny faritra dimy, amin'ity taona ity. (Tapatapany)
Raholiarihanta (nitranga in-1) : Na dia mbola ao anatin'ny hatanorana aza dia efa loa-jafy Raholiarihanta Vololonirina Sahondra, very anarana amin'ny hoe Raly, toerana tazoniny ao anatin'ilay tantara «Malok'ila». (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Nanisana (nitranga in-2) : CFP Nanisana # Tigre Tsarahonenana. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
noraisy (nitranga in-2) : « Tsy noraisin'io mpivarotra io an-tsoratra ny anaran'ny olona nividy ilay laharana ka niteraka ny olana », hoy ny teo anivon'ity orinasa ity, izay nilaza fa ireo laharana tsy misy anarana kanefa amperinasa taorian'io dia notapahana avokoa. (Vondrona Afrikanina – Manery an-kolaka ny fampodiana an-dRavalomanana ny Filankevi-pilaminana)
noentina (nitranga in-2) : Ireto farany izay mangataka ny amin'ny tokony hamerenana ny fandinihana ny fomba noentina nanen-dry ireo olona 44 ao anatin'ity rafitra ity. (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Antohomadinika (nitranga in-1) : Jaguar Antohomadinika # FTM Morondava Ambohimanarina. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Antaninarenina (nitranga in-1) : RAOZY AN-JATONY
toetran' (nitranga in-1) : Hay moa ka ilay toetran' olona manana fandeferana no notadiavina tamin'ilay tantara», hoy izy nampahatsiaro ny dingana voalohany nidirany teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Ramanandray (nitranga in-1) : Tsy azo atao ny mampiseho tahotra amin'ireo vahiny fa dia tsy maintsy manao izay handresena”, hoy
fitiavan' (nitranga in-1) : «Natao kokoa ho an'ny fitiavan'olon-droa no resaka ao anatin'ny fam­pisehoana», hoy i Françis Turbo. (Faran’ny herinandro)
nikarakara (nitranga in-1) : Ny Akany Orchidées Blanches Androhibe no nikarakara ny hetsika. (Fahasembanana – Nanao diabe ireo mpianatry ny Orchidées Blanches)
noentiny (nitranga in-1) : Lasa fehezin'ny fiarahamonina sy ireo mpankafy ny fiainanao», hoy ihany ny fanamarihana noentiny. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Production (nitranga in-1) : Tonga ny fotoana ka raikitra amin'izay ny fiaraha-miasan'i Nathan, ilay nandrombaka ny fandresena tamin'ny fifaninanana The One – ilay feo tsara indrindra- nokarakarain'ny Rta, sy ny mi'Ritsoka Production. (Famokarana mozika – Raikitra ny fiaraha-miasan’ i Nathan sy ny mi’Ritsoka)
arabo (nitranga in-2) : Mpanjaitra karana sy arabo
Noho ny toerana misy azy, anisan'ny fialam-bolin-dRaly ny mipetraka ao an-trano. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Diviziona (nitranga in-1) : ny fandaharan-dalao ho an'ny sabotsy, eo amin' ny sokajy Diviziona faharoa, no homena antsika anio fa rahampitso kosa no hanomezana ny fandaharam-potoana ho an'ny alahady. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
hanapaka (nitranga in-1) : Ny Fitsarana no hanapaka izay ho tompony », hoy i Jaobarison Randrianarivony mpiara-nanatontosa ny lalao. (Lalao vintana – Ifandroritana eny amin’ny Fitsarana ny trano nosarihana tamin’ny finday)
zanakalahy (nitranga in-1) : Nirava ny hariva aho no nifanena taminy nobataina, hoentina ho any amin'ny hopitaly», hoy indray Rafidison Tanteliniaina, zanakalahin'ny maty ihany koa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
hiangaliana (nitranga in-1) : DOME RTA – ANKORONDRANO
hosahaniny (nitranga in-1) : Voalaza ao anatin'ity fanambarana ity mihitsy fa maro amin'ireo olona voatendry handrafitra ny rafitra hisahana ny fiso-kajiana ireo olona tokony hisitraka ny famotsoran-keloka no fantatra sy voaporofo fa «tsy manana fitondrana mendrika mifanaraka amin'ny an-draikitra hosahaniny ao eo anivon'ity rafitra ity». (Fananganana FFM – Mitsipaka ny lisitra nivoaka ny «Voifiraisana»)
Christine (nitranga in-1) : Fananam-bahoaka izany ary melohin'ny lalàna ny fandrombana azy», hoy ny minisitry ny Fitsarana, Christine Razanamahasoa. (Christine Razanamahasoa – «Tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ireo nanodikodim-bola»)
ampanaovina (nitranga in-1) : Niova ho zavatra hafa mihitsy anefa izany ankehitriny satria misy ireo ankizy no ampanaovina fanamiana miaramila sy misaron-tava ary mitondra «kalachnikov». (Dia aza gaga ianao!)
filante (nitranga in-2) : Action Ampandrana # Etoile filante Alarobia. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
nenintoako (nitranga in-1) : «Ilay nenintoako handeha hiasa mara-ina no nahita ny varavaran- kely vaky», hoy i Volaha-siniaina. (Voaroba ireo zava-maneno – Sekolina mpanakanto nisy namaky teny Ambanidia)
hiangaliany (nitranga in-1) : Andrasan'ny mpankafy ny hira «Samy mandefitra», izay hiangaliany amin'ny gadona Sud Af mifangaro amin'ny gadona Banaike avy any amin'ny faritra Atsimo. (Faran’ny herinandro)
Marie (nitranga in-1) : Sainte Marie Ankazomanga Andraharo # Zandrikely Tsaramasay. (Kitra « Tournoi FIMITA » – Ekipa telo no niala an-daharana tetsy Ankazomanga)
Nomarihiny (nitranga in-1) : Anisan'ireo fiainana andavanandrony taloha tsy ataony intsony amin'izao fotoana ny fiantsenana, indrindra ireo entana na zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny sakafo… Nomarihiny rahateo fa «misy ny zavatra tsy maintsy apetraka amin'ny fiarahamonina. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Jaguar (nitranga in-1) : Jaguar Antohomadinika # FTM Morondava Ambohimanarina. (Kitra « Donabe 192 fokontany » – Mitohy ny fifanintsanana hibatana omby matavy)
Rafidison (nitranga in-1) : Nirava ny hariva aho no nifanena taminy nobataina, hoentina ho any amin'ny hopitaly», hoy indray Rafidison Tanteliniaina, zanakalahin'ny maty ihany koa. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
mpilalaon' (nitranga in-1) : Nanampy izany koa ny efa nisian'ny fotoana niarahan'ireo mpilalaon'ny « Malok'ila » rehetra sy ny vady aman-janany mba hialan'ny elanelana eo amin'izy ireo. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Hjra (nitranga in-5) : Voatery notazomina sy arahi-maso etsy amin'ny hopitaly Hjra izy roa lahy, miaraka amin'ny reniny. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
Hanotrona (nitranga in-1) : Hanotrona ny tarika Njila amin'ity fampisehoana ity ireo mpanakanto efatra notsongaina manokana, izay ahitana an'i D-Lain, Anyah, Lily ary Melky. (Sehon’ny 35 taona – Efa eto an-tanindrazana avokoa ny tarika Njila)
nametahana (nitranga in-1) : »Tsy afaka miditra ao amin'ireo orinasa ireo ny olona ahenoana fofon- toaka ary efa nametahana takelaka ireny ho fijoroana vavolombelona », hoy kosa Rakotomanana Tahiry, tonian'ny sampana. (Zava-mahadomelina – Hiara-hiasa amin’ny orinasa ny Vokovoko Manga)
fahefatry (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
tafavoakan' (nitranga in-1) : « Efa ho adin'ny iray taty aoriana vao tafavoakan'ny fokonolona ny fatin'ilay ramatoa», hoy hatrany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany ity. (Ambohitrimanjaka – Ramatoa iray maty nianjeran’ny trano)
Duchesne (nitranga in-2) : Pacifique Fort Duchesne # CC Club Anatihazo Isotry. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
fifampitondrana (nitranga in-1) : «Niova ny fifampitondrana eo amin'ny mpiara-belona ary betsaka ny zavatra tsy azo atao intsony. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
Moramanga (nitranga in-1) : FANAMBARAM-PANANANA > Omaly no nanatitra ny fanam- baràm-panana tetsy amin'ny Bianco, tetsy Ambohibao, ireo zandary mianatra ao amin' ny sekoly ambonin'ny zandarimaria ao Moramanga sy avy ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra. (Tapatapany)
onenan' (nitranga in-1) : nivarahontsana ny iray tanàna raha nahita ny ra nandriaka tao amin'ny trano onenan'ny lehilahy iray, rahalahy am-panambadian'ity raim-pianakaviana namoy ny ainy tetsy Antohamadinika-Atsimo. (Nitolefika ilay andry niankinana – Tsindrona antsy tokana nahafaty raim-pianakaviana)
ambodiomby (nitranga in-1) : olona telo, nahitana lehilahy roa sy ramatoa lehibe iray, no saron'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadome- lina ambodiomby nivarotra rongony, teny amin'ny faritra Ambo-hijafy Fenoarivo, ny ala-robia 13 febroary teo tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. (Fenoarivo – Sarona ireo olona telo mpamatsy rongony)
Ambohijatovo (nitranga in-1) : RAOZY AN-JATONY
Anosy (nitranga in-2) : asa lehibe no hotanterahina amin'ilay lalana nihotsaka hatramin'ny 24 desambra teo etsy Anosy. (Fihotsahana – Atomboka amin’ny alatsinainy ny fanamboarana ny lalan’Anosy)
hikojakojana (nitranga in-1) : Atao izay hikojakojana azy mba hanara-penitra noho ireo kianja eto amintsika handray lalao amin'ny CAN junior», hoy ny kolonely Razafindrakoto William. (Fotodrafitrasa – Haompana bebe kokoa amin’ny fanatanjahantena ireo kianjan’Antananarivo)
friperia (nitranga in-2) : Teny amin'ny friperia
Anisan'ny nahafinaritra an'i Raly teo amin'ny filalaovana sarimihetsika ny anjara toerana noraisiny ao amin'ny Malok'ila. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
ANKORONDRANO (nitranga in-1) : DOME RTA – ANKORONDRANO
nandehanako (nitranga in-1) : Rakotoarisoa Joseph fony mbola velona…
ahiana (nitranga in-3) : “Tsy maintsy arahi-maso akaiky ny fivoaran' io andian-drahona io satria ahiana hivadika rivo-doza”, hoy i Newsman Priscoffe, avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Dia aza gaga ianao!)
Analamahitsy (nitranga in-2) : FCG Analamahitsy # Tafaray Antsahamamy. (Tournoi fiteramana – Andro farany eny amin’ ny Kianjam-pasika)
présent (nitranga in-1) : Santionany amin'ireny ny «Si j'avais un marteau», «A présent tu peux ton aller», «Reviens vite et oublie»… Mpahay zava-maneno 16 mirahalahy kosa no hanaraka azy ireo amin'ny mozika ary handravaka izany ny dihy sy soradihy ary tantara an-tsehatra miaraka amin'ireo mpandihy 8 mianadahy avy amin'ny Dj'Ampela, D1…. (Faran’ny herinandro)
Anisan' (nitranga in-5) : Anisan'ny nahasarika azy hatrany ny anjara toeran'ireo renim-pianakaviana ao anatin'ny tantara. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nanokatra (nitranga in-1) : Fampandrian-tany > Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika manokana fampandrian-tany any amin' ny faritra Bongolava ny kolonely Rakotomahamina Florens, lehiben'ny fari-piadidian'ny zandarimaria aty Antananarivo, ny alarobia 13 desambra teo. (Tapatapany)
teto (nitranga in-4) : Ny teto an-toerana, izay nahitana an'i Hery sy Datita Rabeson, dia efa ela no nanomana fatratra ity seho ity, indrindra taorian'ny fandalovan'i Njila teto an-tanindrazana, ny faran'ny taona teo. (Dia aza gaga ianao!)
2005 (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 2005 no teraka ny tantarany sy ny sarimihetsika satria anisan'ireo mpilalao 10 notsongain'ny Scoop Digital tamin'ireo olona 200 mahery nisoratra anarana hifaninana hilalao tamin'ilay tantara mitohy «Jiaby jiaby» izy. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
nihaona (nitranga in-1) : «Vehivavy roa izahay no nasaina nihaona farany tamin'ny fifaninanana. (Fiainana mpanakanto – «Misy ny fitiavana ara-tantara sy ny tena fitiavana», hoy i Raly)
2009 (nitranga in-1) : Ho an'i Tongue Nat dia efa hatramin'ny taona 2009 no namolavolany ity rakikira ity ary hira 28 no noforonina, ka ny 14 no nampidirina ao anatin' ity vokatra ity. (Vokatry ny « Be Mozika » – Miala any ny HAT-n’i Tongue Nat sy ny Tantsaha an-dRajery)
Anyah (nitranga in-3) : Mpanakanto maromaro no miara-miasa amin'i Tongue tamin'ity rakikira ity ka anisan'ireny ry Anyah, Kougar, Raj, Marion ary GMMC. (Faran’ny herinandro)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/15_Febroary_2013&oldid=9691881"
Voaova farany tamin'ny 15 Febroary 2013 amin'ny 22:10 ity pejy ity.